May 2010 | Bur-Imna
စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအား ပလဲ့ဒွန်းဖိုက်တွင် နေရာချပေးမည်
မေလ ၂၇၊ ၂၀၁၀
“ဒီမှာ ကျောင်းအပ်နေပြီ၊ နောက်တစ်ရက် နှစ်ရက်ကြာရင် ကျောင်းဖွင့်တော့မယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဒီမှာဆက်နေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး” ဟု ခြေတုကို ဘေးတွင်ချလျက် သားနှစ်ယောက်နှင့်အတူ ထမင်းစားနေသော ဒုက္ခိတစစ်ပြေးဒုက္ခသည် နိုင်ဟောင်းမွန်က အားကိုးရာ ရှာသည့် မျက်လုံးအစုံဖြင့် ပြောသည်။
ယနေ့တွင် ခလောက်ခနီဒုက္ခသည်စခန်းရှိ စာသင်ကျောင်း၌ ကျောင်းစတင်အပ်နှံ လက်ခံနေပြီဖြစ်၍ ထိုကျောင်းတွင် ယာယီတည်းခိုနေကြသော စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များက ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် နေရာဖယ်ရှားပေးရတော့မည် ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့အတွက် စခန်းအနီးရှိ ပလဲ့ဒွန်းဖိုက်ကျေးရွာတွင် ယာယီတဲ ၃၀ ဆောက်လုပ်ပြီး နေရာချပေးမည်ဟု စခန်းအုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ပလဲ့ဒွန်းဖိုက်မှာဆိုရင် သူတို့အတွက် ဒီမှာထက် ပိုပြီးအဆင်ပြေမှာ၊ ဟိုမှာက မြေပြန့်လည်း ဖြစ်တယ်၊ လူလည်းနည်းတော့ သောက်သုံးရေအတွက်လည်း အဆင်ပြေမယ်၊ ဒီမှာက လူလည်း များပြီး မြေပြန့်လည်း မရှိတော့ နေရာချပေးဖို့ အဆင်မပြေဘူး” ဟု သူက ပြောသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် စစ်အစိုးရအကြား စစ်ဖြစ်နိုင်မည့် အရိပ်အယောင် မမြင်တွေ့ရခြင်းကြောင့် ထွက်ပြေးလာသော ရွာသား ၆၀၀ ကျော်အနက် ၅၀၀ ခန့် နေရပ်ပြန်သွားကြပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဒုက္ခိတများ၊ နို့စို့အရွယ်ကလေးမိခင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ကလေးများ ကျန်ရှိနေသေးသည်။
“ကျနော်တို့က တခြားသူတွေလို ပြန်လို့မဖြစ်သေးဘူး၊ တကယ်လို့ စစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သူများတွေလို ထပြေးလို့ မရဘူးလေ၊ အနည်းဆုံးတော့ ဒီမှာ ၆ လလောက် နေရဦးမယ်” ဟု နိုင်ဟောင်းမွန်က ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ခလောက်ခနီဒုက္ခသည်စခန်း၌ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် အိမ်ထောင်စု ၂၀၊ လူဦးရေ ၉၃ ဦးနှင့် ပလဲ့ဒွန်းဖိုက်ကျေးရွာ၌ အိမ်ထောင်စု ၆ စု၊ လူဦးရေ ၂၇ ဦး ကျန်ရှိလျက် ရှိနေသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စစ်အစိုးရ ကမ်းလှမ်းထားသည့် ပြည်သူ့စစ်အသွင်ပြောင်းခြင်းကို တရားဝင်ငြင်းပယ်ပြီးနောက်ပိုင်း နှစ်ဖက်လုံးမှ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို မြင်တွေ့နေရခြင်းကြောင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှ ရွာသားအများအပြား ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ခလောက်ခနီဒုက္ခသည်စခန်းနှင့် ပလဲ့ဒွန်းဖိုက်ကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့လာကြခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 4:59 AM0comments
ရန်ပုံငွေဟု အကြောင်းပြကာ ကြံ့ဖွတ်များ ငွေတောင်းခံနေ
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့ရှိ ကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းက ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှစပြီး ကြံခင်းရပ်ကွက်ရှိ လှေဂိတ်တွင် ရန်ပုံငွေအတွက်ဟု အမည်ခံပြီး ငွေတောင်းခံနေသည်။
အဆိုပါဂိတ်တွင် စုစုပေါင်းလှေ ၂၄ စီး ပြေးဆွဲနေပြီး အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် တစ်ရက်လျှင် ၄ စီး ပြေးခွင့်ပြုကာ နှစ်ရက်တခါ ငွေစုပြီး ခွဲဝေယူကြသည်ဟု ဂိတ်နှင့် နီစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ပြေးဆွဲတဲ့ လှေတွေကို နှစ်ရက်တခါ ငွေစုတယ်၊ ရတဲ့ငွေအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ၈ ပုံ ပုံတယ်၊ လှေ ၈ စီးဆိုတော့ တယောက်တပုံပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ အခုက ကြံ့ဖွတ်ရန်ပုံငွေဆိုပြီးတော့ သက်သက်တပုံဝင်ယူလိုက်တယ်၊ အဲဒီတော့ ၉ ပုံ ပုံရတယ်၊ လှေ ၈ စီးက ဆွဲလို့ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံကို ၉ ပုံ ပုံရတယ်၊ သက်သက် ငွေဝင်ယူလိုက်တာပဲ”ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
၄င်းအပြင် ထိုလှေဂိတ်မှာလည်း ကြံ့ခိုင်ရေးအသင်းအမည်ခံပြီး မဲဆောက်တစ်ဘက်ကမ်းမှ ဝင်လာသည့် ပစ္စည်းအပေါ်မူတည်ပြီး ရလာသည့်ငွေပမာဏမှ ၂၀ ရာခိုင်းနှုန်း ကောက်ယူနေသည်ဟု ထိုဂိတ်ရှိ လှေသမားနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
“အဲဒီလှေဂိတ်မှာ ကြံ့ဖွတ်က လူတွေ လွှတ်ထားတာရှိတယ်၊ သူတို့လူယုံပေါ့ ရောက်သမျှပစ္စည်းတွေ ဆွဲသမျှလှေတွေ သူတို့ အကုန်သိတော့ ပိုက်ဆံတောင်းတယ်” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
လှေသမားတို့သည် ခရီးသည်များကို မြဝတီတစ်ဘက်ကမ်းမှ မဲဆောက်တစ်ဘက်ကမ်းသို့ လက်မှတ်တစုံတရာမလိုဘဲ လွယ်ကူချောမွေ့စွာ သွားလာနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တို့မှ အခွန်ဆောင်ထားပြီးဖြစ်သည်။
နှစ်ဆန်းပိုင်းမှစပြီး၊ မြဝတီမြို့ပေါ်ရှိ ကြံ့ဖွတ်အဖွဲ့ဝင်များသည် ရန်ပုံငွေဆိုပြီး မြဝတီမှ လိုင်ပြေးဆွဲနေသည့် အငှားဆိုင်ကယ်များကိုလည်း အင်္ကျီထုတ်ထားသေးသည်ဟု မြဝတီဒေသခံတို့က ပြောသည်။
“အင်္ကျီတစ်ထည်ကို ၁၂၀၀၀ ကျပ် ပေးရတယ်၊ ဒီလိုမျိုးလုပ်တာ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပဲ ဖြစ်တယ်၊ အရင်ကဆို စစ်မှုထမ်းဟောင်းအသင်းပဲရှိတယ်၊ အခုဆို ကြံ့ဖွတ်အသင်း တွေရှိလာနေပြီ” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 3:47 AM0comments
World vision မှ စာသင်ကျောင်းအသစ် တည်ဆောက်ပေးနေ
Tue 25, May 2010
World vision မှ ပငကျေးရွာတွင် ပျက်စီးနေသော မူလတန်း စာသင်ကျောင်းကို မုန်တိုင်ခံ ကွန်ကရစ်ကျောင်းအဖြစ် တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ပေးနေသည်။
မွန်ပြည်နယ်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ ပငကျေးရွာ အနောက်ရပ်ရှိ ပျက်စီးနေသော မူလတန်းကျောင်ဆောင်ကို ပြည်တွင်းအခြေစိုက် NGO အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့် World vision မှ မေလ ၂၀ ရက်နေ့မှစပြီး၊ တစ်လအတွင်း အပြီးသတ် တည်ဆောက်ပေးမည်ဟု သိရသည်။
အစိုးရမှ ထောက်ပံ့မှု အားနည်းနေခြင်းနှင့် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းမှ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ပံ့ပိုးမှု အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ၄င်း World Vision အဖွဲ့မှ ငွေကျပ် သိန်း ၃၀၀ အကုန်ကျခံကာ တည်ဆောက်ပေးသွားမည်ဟု ၄င်းအဖွဲ့မှ ဖွံ့ဖြိုးရေးတာဝန်ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ကျောင်းကတော့ အစိုးရကျောင်းပဲ၊ ဒါပေမဲ့ အားလုံးတော့ သူတို့မပံ့ပို့ပေးဘူး၊ အခုဆို ပညာရေးဌာနကနေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ထောက်ပံ့ပေးတယ်၊ ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ကတော့ လုပ်အားအနေနဲ့ပဲ ပါဝင်ကူညီမှာဖြစ်တယ်” ဟု ၄င်းတာဝန်ခံက ပြောသည်။
သို့သော်လည်း ရွာခံနှင့် ဆရာ ဆရာမတို့ဦးဆောင်ပြီး ရွာအတွင်း ထိုကျောင်းဆောင်အတွက် လှည့်လည် အလှုခံထွက်နေသည်ဟု ပငရွာသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
“အဲဒီကျောင်းက ပျက်စီးနေတာ တော်တော်ကြာနေပြီး၊ အခုမှပဲ အသစ်ပြန်ဆောက်ဖြစ်တာ၊ တအိမ်ဘယ်လောက် ထည့်ရမယ်ဆိုပြီး မတောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ စေတနာရှိသလောက်တော့ ထည့်လို့ရတယ်” ဟု ၄င်းရွာသားက ဆက်ပြောသည်။
ပငကျေးရွာတွင် အထက်တန်းကျောင်း ၁ ကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်း ၁ ကျောင်းနှင့် မူလတန်းကျောင်း ၅ ကျောင်းရှိပြီး၊ ၄င်းပြန်လည်တည်ဆောက်မည့် မူလတန်းကျောင်းတွင် ကျောင်းသားဦးရေ ၁၂၀ ပညာသင်ယူနေသည်။
“အခုလို တည်ဆောက်ပေးတာတော့ အရမ်းကောင်းပါတယ်၊ အဲဒီကျောင်းကလည်း ပျက်စီးနေတာတော်တော်ကြာနေပြီး” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ပငရွာခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
World vision အဖွဲ့သည် အစိုးရမဟုတ်သော (NGOs) အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်းမာရေ၊ ပညာရေးအစရှိသည့် ထောက်ပံ့မှုများကို အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းပြီး၊ ပြည်တွင်း၌ ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ထိုမျှမက ပြီးခဲ့သည့် လအနည်းငယ်ကလည်း သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် ကလိုင်ပဒေါကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းကိုလည်း ၄င်း World vision အဖွဲ့မှ ငွေကျပ် သိန်း ၂၀၀ အကုန်ကျခံပြီး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းပေးခဲ့သည်။
ပငကျေးရွာသည် မွန်ပြည်နယ်အတွင်း အိမ်သုံးဆား အများဆုံးထွက်ရှိရာ ကျေးရွာအဖြစ် လူသိများခဲ့သည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 3:45 AM0comments
လယ်သမားများအတွက် ချေးငွေ ယခင်နှစ်ထက်တိုးချေးပေး
မေလ ၂၅၊ ၂၀၁၀
ယခုနှစ်အတွင်း စပါးစိုက်တောင်သူများအတွက် မြန်မာ့လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်မှ ချေးငွေကို ယခင်နှစ်ကထက် တစ်ဆတိုးချေးပေးသည်ဟု မုဒုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ လယ်သမားတို့က ပြောသည်။
ထိုချေးငွေကို ယမန်နှစ်က တစ်ဧကလျှင်တစ်သောင်းနှုန်းဖြင့် မြန်မာ့လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်မှ အတိုး ၃ ကျပ် နှုန်းဖြင့် ချေးပေးပြီး၊ ယခုနှစ်မှာ တစ်ဧက နှစ်သောင်း အတိုး ၂ ကျပ် ပြား ၇၀ ဖြင့် ချေးပေးသည်။
“ဒီနှစ်မှာ တစ်ဧက တစ်သောင်းတိုးချေးပေးတယ်၊ ချေးငွေယူတဲ့လူတွေက ရယကရုံးမှာ စာရင်းသွားသွင်းရတယ်၊ ပြီးရင် ဥက္ကဌကနေ မုဒုံက လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်မှာ ထုတ်လာပေးမယ်၊ လယ်သမားတွေက ရယကရုံးမှာ သွားယူရတယ်” ဟု မုဒုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ချေးငွေယူထားသည့် လယ်သမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
လယ်သမားများအတွက် အစိုးရချေးငွေကို မေလမှစပြီး ချေးငွေလိုသူများ မြန်မာ့လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်မှ မြို့နယ်တိုင်းမှာ စတင်ချေးပေးနေသည်။
“ဒီနှစ်မှာတော့ ချေးတဲ့လူတွေ တော်တော်များတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စပါးအထွက်လျော့ထားတာကြောင့် ဒီနှစ်စိုက်စရိတ်အတွက် လယ်သမားတိုင်းလိုလိုက အခတ်အခဲဖြစ်ကြတယ်၊ မချေးတဲ့လယ်သမားတွေ အနည်းအကျဉ်းပဲရှိတယ်၊ ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူတွေပဲ မယူတာလေ၊ ကျနော်ဆို ခါတိုင်းနှစ်မချေးပါဘူး၊ ဒီနှစ်မှ ကိုယ့်မှာ ရစရာမရှိလို့ ချေးရတာပါ၊ အပိုလည်းချေးပေးတယ်ဆိုတော့” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
မုဒုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရယကဥက္ကဌတစ်ဦးက ယခုလောလောဆယ်မှာတော့ ကျနော်တို့ရွာမှာ ၁၈ သိန်းချေးယူထားပြီးဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် ချေးချင်သည့်လယ်သမားများလည်း ရှိသေးကြောင်း သူက ပြောသည်။
“အစိုးရ ချေးပေးတဲ့ငွေက အနည်းအကျဉ်းပဲလေ တချို့ပိုက်ဆံရှိတွေကျတော့ သူတို့ အရူပ်မခံဘူး ယူလည်းမယူဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်ကျတော့ မနှစ်က စပါးအထွက်လျော့ထားတဲ့အတွက် ချေးငွေယူကြတာများတယ်၊ သူတို့ ချေးပေးတဲ့ငွေက မလောက်မငှပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် မရှိတာနဲ့စာရင်တော့ နည်းနည်းရတာလဲ နည်းနည်းတော့ အဆင်ပြေသွားမှာဆိုပြီး ချေးကြတယ်” ဟု အထက်ပါ လယ်သမားက ပြောသည်။
ယခုလို လယ်သမားများအတွက် အစိုးရချေးငွေတိုးပေးမှုအပေါ် တချို့က စစ်အစိုးရမှ ဒေသခံများကို ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြည်သူများ စစ်အစိုးရအပေါ် အမြင်ကောင်းများရှိလာစေရန် ဒေသခံပြင်သူတွေကို စည်းရုံးနည်းတမျိုးပဲဟု ပြောဆိုနေကြသည်။
မြန်မာ့လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဘဏ်မှ တောင်သူလယ်သမားများအတွက် ချေးပေးထားသည့် ချေးငွေများကို စပါးရိတ်သိမ်းပြီးချိန်တွင် တောင်သူလယ်သမားတို့က အတိုးရော အရင်းပါ ပြန်ဆပ်ပေးရသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:31 AM0comments
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြု
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီအား နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းကို ခွင့်ပြုချက်ရရှိကြောင်း ယနေ့ထုတ် စစ်အစိုးရ သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားသည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုဒ်မ ၉ နှင့်အညီ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီကို မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၃ ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီက မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းတို့တွင် ယှဉ် ပြိုင်အရွေးခံရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ပါတီ၏ ပထမ ခေါင်းဆောင် နိုင်ငွေသိန်း၊ ဒုတိယခေါင်း ဆောင်နိုင်လှအောင်နှင့် ပါတီတံဆိပ် အလံများကိုလည်း အသီးသီး ရွေးချယ်အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငွေသိန်းက ပြောသည်။
ပါတီ၏ ရည်ရွယ်ချက်အနေဖြင့် မွန်အမျိုးသားထုတစ်ရပ်လုံးနှင့် မွန်ဒေသတဝှမ်းရှိ တိုင်းရင်းသားများအား ကိုယ်စားပြုကာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာမင်းနွယ် စိုးက ပြောသည်။
''မွန်အမျိုးသားထုတစ်ရပ်လုံးနဲ့ မွန်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားညီ အကိုတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်အတွက် ဥပဒေ ဘောင်အတွင်းကနေ ကျနော်တို့ ကိုယ်စားပြု ဆောင်ရွက်သွားမယ်'' ဟု သူက ပြောသည်။
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီရုံးကို မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ မြိုင်သာယာရပ်ကွက်ရှိ အထက (၁) အနီး လမ်း (၂၀) ရှိ မြေကွက်အမှတ် (၇) မှာ ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
မွန်အမျိုးသားကို ကိုယ်စားပြုမည့် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ် ရှိသင့်သည်ဟု ယုံကြည်သူများက မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီအား လိုလားကြပြီး၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်မခံသူများက ၄င်းပါတီအား ကန့်ကွက်ကြကြောင်း အမြင်ကွဲပြားမှုရှိသည်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ပြီး အမတ် ၅ နေရာ အနိုင်ရခဲ့သည့် မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပေး ခြင်းမရှိပါက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို စဉ်းစားမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီက ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်တစ်စုံ တစ်ရာပေးရန် ထိုပါတီတို့က ငြင်းဆိုကြသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေပြုဌာန်းသည့်နေ့ (မတ်လ ၈ ရက် နေ့) မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၆၀ (မေလ ၆ ရက်) နေ့ထိ လက်ရှိပါတီများ မှတ်ပုံတင် ခြင်းမပြုပါက နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှ အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:30 AM0comments
ခြံထွက်သစ်သီး အထွက်နှုန်း လျော့နည်း
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း သစ်သီးစိုက်ပျိုးရာ မုဒုံမြို့နယ်နှင့် ရေးမြို့နယ်ဘက်မှာ ယခုနှစ် ရာသီဥတုပူပြင်းမှုကြောင့် သစ်သီးပင် သေဆုံးမှုရှိကာ သစ်သီးအထွက်နှုန်း လျော့နည်းသည်ဟု ဒေသခံတို့က ပြောသည်။
ရေးချောင်းဖျားဒေသဘက်တွင် ဒူးရင်းသီး၊ မင်းဂွတ်သီး၊ နာနတ်သီး အစရှိသည့် သစ်သီးဝလံများ အများဆုံးထွက်ရှိရာ အရပ်ဒေသဖြစ်သည့်အတွက် ယခုနှစ် ရာသီဥတုပူပြင်းခြင်း၊ ရေရရှိမှုနည်းခြင်းကြောင့် အပင်သေဆုံးမှုရှိကာ သစ်သီးအထွက်နှုန်းလည်း သုံးပုံတစ်ပုံခန့် လျော့သွားပြီး သစ်သီးဈေးနှုန်းလည်း တက်နေကြောင်း ရေးမြို့မှ သစ်သီးခြံပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“ဒီနှစ်မှာ နွေရှည်လို့ အပင်တွေ သေတာ၊ သစ်သီးအထွက်လည်း လျော့တယ်၊ အရင်နှစ်တွေဆို သစ်သီးတွေ အများကြီးရောင်းရတယ်၊ ဒီနှစ်တော့ ရောင်းဖို့မပြောနဲ့ အိမ်မှာစားဖို့တောင် မရှိဘူး၊ ဝယ်စားဖို့ကလည်း သစ်သီးတွေကဈေးကြီးလာတယ်၊ မနှစ်က ဒူးရင်းသီး သုံးလုံးဆို (၁၀၀၀)၊ ဒီနှစ်တော့ တစ်လုံး (၁၀၀၀) တောင် ဖြစ်လာတယ်” ဟု ၄င်းခြံရှင်က ပြောသည်။
သစ်သီးဖူးပွင့်ချိန်၊ အသီးကင်းစချိန်တွင် ရာသီဥတုပူပြင်းမှုကြောင့် ရေရရှိမှုနည်းခြင်း၊ အကင်းကင်းချိန်တွင် နှင်းမိုးထိသဖြင့် အကင်းများကြွေကျခြင်း၊ အပင်သေဆုံးမှုရှိခြင်းတို့ကြောင့် သစ်သီးများယခင်ကထက် အလုံးသေးခြင်း၊ သစ်သီးထွက်ရှိမှုနည်းပါးခြင်းကြောင့် သစ်သီးခြံပိုင်ရှင်များအတွက် စီးပွားရေး ဆုံးရူံးမှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ကျောင်းရွာကျေးရွာမှ ခြံရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“အရင်နှစ်တုန်းက သင်္ကြန်လွန်ပြီး တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်ဆိုရင် မိုးရွာနေပြီး၊ ဒီနှစ်ကတော့ ဝါထပ်ထားလို့ မိုးရွာတာနောက်ကျတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ရာသီဥတုကလည်း ပူပြင်းတယ်၊ မိုးမရွာဘဲနဲ့ မိုးအုတ်နေတာကများတော့ သစ်သီးအကင်းတွေ နှင်းမိုးထိသွားပြန်ဆိုတော့ သစ်သီးတွေ ယခင်နှစ်ကထက် အလုံးသေးသွားတယ်”ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
မုဒုံမြို့နယ်ဘက်တွင်လည်း သစ်သီးထွက်ချိန်တွင် နှင်းမိုးထိခြင်း၊ နေပူပြင်း၍ ရေရရှိမှုနည်းခြင်းကြောင့် အပင်သေဆုံးခြင်း၊ သစ်သီးပျက်စီးဆုံးရူံးမှုများသည်။ ယခုနှစ်သည် ခါတိုင်းနှစ်တွေထက် သစ်သီးအလုံး (၁၀၀) လျှင် အလုံး (၃၅) လောက် ပျက်စီးမှုရှိကြောင်း ကွမ်တာကျေးရွာမှ သစ်သီးခြံရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“ရေတွေခန်းခြောက်သွားလို့ ဆည်မြောင်းကရေကိုလည်း ခဏဖြတ်ထားတယ်၊ အကင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာလည်း နှင်းမိုးထိသွားတယ်၊ ရာသီဥတုကလည်းပူ ရေကလည်းမရတော့ သစ်သီးပျက်စီးတာများတယ်၊ အဲဒါကြောင့် ဒီနှစ်သစ်သီးအထွက်နည်းတယ်”ဟု ၄င်းသစ်သီးခြံပိုင်ရှင်က ပြောသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:32 AM0comments
ဆန်ဈေးနှုန်း နောက်ထပ်တက်ရန် အလားလာရှိဟု ဒေသခံတို့ပြော
Thu 20, May 2010
ယခုနှစ် စပါးပျိုးချိန်နောက်ကျခြင်းနှင့် ယမန်နှစ်က စပါးအထွက်လျော့နည်းခြင်းတို့ကြောင့် စပါးဈေးများ လက်ရှိဈေးထက် ပိုတက်လာဖွယ်ရှိကြောင်း တောင်သူလယ်သမားတို့က ပြောသည်။
“မနှစ်ကဆိုရင် လယ်သမားတိုင်းက စပါးအထွက်လျော့ကျတယ်၊ ဒီနှစ်လည်း ခုချိန်ထိ မိုးမရွာသေးဘူး၊ စိုက်ချိန်လည်း နောက်ကျတယ်၊ ရေကလည်း ရှားနေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုလာဦးမလဲတော့မသိဘူး ဆန်ဈေးကတော့ နေ့တိုင်းဆိုသလို တက်တက်လာနေတယ်” ဟု မုဒုံမြို့မှ လယ်သမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
မေလ ပထမအပတ်စပြီး ဆန်ဈေး တစ်အိတ်လျှင် ၃၀၀၀ ကျပ် အထိတက်သွားသည်။ လက်ရှိပေါက်ဈေးအရ ဆန်မွှေးတစ်အိပ်လျှင် ၃ သောင်း ၁ ထောင်၊ ကောက်ကြီးဆန် တစ်အိပ်လျှင် ၂ သောင်း ၈ ထောင်ကျပ်နှင့် ဆန်ကြမ်း တစ်အိပ်မှာ ၂ သောင်း ၂ ထောင်ကျပ်အထိ တက်သွားသည်ဟု မော်လမြိုင်မှ ဘုရားသုံးဆူမြို့သို့ ဆန်တင်ပို့နေသည့် ကုန်သည်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“မနှစ်က ဒီအချိန်ဆိုရင် ကောက်ကြီးဆန်တစ်အိပ်ကို ၁ သောင်း ၇ ထောင်ကျပ်ပဲရှိတယ်၊ အခု မိုးတောင်မကျသေးဘူး ဒီလောက်ထိတက်သွားပြီးဆိုတော့ စပါးထွက်ချိန်ရောက်ဖို့ ဆိုရင် ဘယ်လောက်တက်ဦးမလဲတော့ မသိဘူး” ဟု ၄င်းကုန်သည်က ပြောသည်။
အပူဒဏ် ပြင်းထန်ခြင်းနှင့် ရေခန်းခြောက်ခြင်းတို့ကြောင့် ရာဘာစေး အထွက်နည်းသည့်အပြင် ဆန်ဈေးလည်း အဆမတန်တက်လာနေခြင်းကြောင့် ရာဘာခြံရှင်များနှင့် ရာဘာခြံလုပ်သားများ မိုးတွင်းချိန် စားဝတ်နေရေးအတွက် ပူပန်နေရသည်ဟု မုဒုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရာဘာခြံပိုင်ရှင်တို့က ပြောသည်။
“ပူလို့ ရာဘာအစေးလည်းသိပ်မထွက် ဈေးလည်မကောင်း၊ ဆန်ဈေးပဲ ဆက်တိုက်တက်နေတယ်၊ မိုးတွင်းလည်းရောက်လာတော့မယ်ဆိုတော့ ဆန်ဈေး ဒီ့ထက်ပိုတက်မှာတော့ သေချာပါတယ်” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
ယမန်နှစ်က မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ရေကြီးခြင်း၊ စပါးခင်းများ ပိုးကိုက်ဖျတ်စီးမှုရှိခြင်းကြောင့် စပါးအထွက်နှုန်းနည်းရခြင်းဖြစ်သည်ဟု အထက်ပါ လယ်ပိုင်ရှင်က ပြောသည်။
“လယ် ၃၀ ဧကမှာ စပါးတင်း ၅၀၀ ပဲထွက်တယ်၊ ပုံမှန်အရဆိုရင် တင်း ၁၄၀၀ ထွက်ရမယ်၊ ကျမတို့လယ်မှာပဲ မဟုတ်ဘူး၊ လယ်တော်တော်များများက စပါးအထွက်နည်းကြတယ်၊ ဒါကြောင့် ဆန်ဈေးတွေ တအားခုန်တက်သွားတာပေါ့” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
ယမန်နှစ်က မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အများစုမှာ စပါးမရိတ်သိမ်းခင်အချိန်က စပါးခင်းအများအပြား ပိုးထိထားခြင်းကြောင့် စပါးအထွက်နှုန်း ထက်ဝက်ကျော် လျော့ကျသွားခြင်းကြောင့် ယခုလို စပါးဈေး အဆမတန်တက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် မုဒုံမြို့နယ်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်နှင့် ရေးမြို့နယ်တို့တွင် စပါးအထွက်နှုန်း အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
၄င်းတို့သာမက ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း အစရှိသည့်ဒေသတို့မှာ မိုးတွင်းစပါးစိုက်ပျိုးချိန်အတွင်းတွင် စပါးပင်များကြွက်ကိုက် ခံရခြင်း၊ ရေကြီးဒဏ်၊ ပိုးကျသည့်ဒဏ် ခံရခြင်းတို့ကြောင့် စပါးအထွက်လျှော့ကျရာမှ ယခုကဲ့သို့ စပါးဈေးများ ထိုးတက်လာသည်ဟု သိရသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 6:50 AM 1 comments
နိုင်အောင်နိုင်အဖွဲ့မှ အခြေခံစစ်သင်တန်း ပေးနေပြီ
မေလ ၁၉၊ ၂၀၁၀
ပြည်သူ့စစ်တပ်အသွင်ပြောင်းမည့် နိုင်အောင်နိုင်ဦးဆောင်တပ်ဖွဲ့မှ စုဆောင်းရရှိထားသည့် တပ်သားသစ်များကို မေလပထမပတ်မှစပြီး စစ်အစိုးရမှ အခြေခံစစ်သင်တန်း ပို့ချပေးနေသည်။
မွန်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကို ဦးဆောင်သော နိုင်အောင်နိုင်အဖွဲ့မှ တပ်သားသစ် ၃၈ ယောက်တို့ကို သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ ရသေ့တောင်ကျေးရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အခြေခံစစ်သင်တန်း ပို့ချလျက်ရှိသည်။
ပြည်သူ့စစ်အသွင်ပြောင်းရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် တပ်သားအင်အား (၅၀၀) ပြည့်မီရန်အတွက် ၎င်းတပ်ဖွဲ့မှ စည်းရုံးရေးဆင်းနေကြောင်း အစည်းရုံးခံရသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
သူက “အခုလောလောဆယ်မှာ နိုင်အောင်နိုင်တို့က သူတို့တပ်သားအတွက် မွန်ပြည်သစ်ပါတီက အနားယူထားတဲ့ ပါတီဝင်ဟောင်းတွေ၊ ကျောင်းပြီးထားတဲ့ လူငယ်တွေကို သူတို့တပ်ဖွဲ့ထဲဝင်ဖို့ လိုက်စည်းရုံးနေတယ်” ဟု ပြောသည်။
ကျောင်းပြီးထားသူများ ၎င်းတပ်သို့ ဝင်ပါက ဗိုလ်ကြီးအဆင့် ရာထူးနှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီဝင်ဟောင်းများအား အနိမ့်ဆုံး ဗိုလ်အဆင့် ရာထူးဖြင့် လိုက်လံစည်းရုံးနေကြောင်း အစည်းရုံးခံရသူက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ရေးမြို့နယ်၊ လမိုင်းမြို့နယ်ခွဲနှင့် သောင်ပြင်ကျေးရွာဘက်တွင် ၎င်းတပ်ဖွဲ့အတွက် နိုင်ရွှေက ဒေသခံများကို လိုက်လံစည်းရုံးနေကြောင်း လမိုင်းမြို့ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်နှင့် မုဒုံမြို့နယ်အတွင်းတွင်လည်း ၎င်းတပ်ဖွဲ့က စည်းရုံးရေးဆင်းနေပြီး အစည်းရုံးခံရသူများတွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီဝင်ဟောင်းများလည်း ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
နိုင်အောင်နိုင်သည် ယခင်က မွန်ပြည်သစ်ပါတီတွင် မွန်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်ကို ဦးဆောင်သော စစ်ဦးစီးချုပ်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့ဝင် အချို့နှင့်အတူ မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ ခွဲထွက်ခဲ့သည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 3:02 AM0comments
ငွေကြေးတောင်းခံရန် အထိန်းသိမ်းခံထားရသူများ ပြန်လွတ်လာ
မွန်ခွဲထွက်ရေး နိုင်ချမ်းဒိန်းအဖွဲ့မှ ငွေတောင်းခံရန် ခေါ်ဆောင်သွားသည့် တနင်္သာရီတိုင်း ရေဖြူမြို့နယ် ကျောက်ကဒင်းရွာနှင့် ရာဖူးရွာမှ ဒေသခံများ ယမန်နေ့က ပြန်လွတ်လာပြီးဖြစ်သည်။
ပြန်လွတ်လာသည့် ဒေသခံများကို ရေဖြူမြို့နယ် အခြေစိုက် ခမရ ၂၈၂ တပ်ရင်းမှ တာဝန်ရှိသူတို့ ခေါ်ယူ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းရှိခဲ့သည်ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ကျမတို့ရွာက ၅ ယောက် မနေ့က ပြန်ရောက်လာတယ်၊ ကျန်တဲ့ ၂ ယောက်က အခု ရာဖူးရွာမှာရှိနေတယ်၊ ပြန်လွတ်လာတဲ့လူတွေကို စစ်တပ်က ခေါ်ပြီးတော့ နိုင်ချမ်းဒိန်းအဖွဲ့တွေ ဘာလုပ်ခိုင်းတယ်၊ ဘယ်နေရာကို သူတို့ခေါ်သွားတာလဲ၊ ပြီးတော့ ပိုက်ဆံတောင်းသေးလား၊ စတာတွေ မေးမြန်း စစ်ဆေးတယ်” ဟု ကျောက်ကဒင်းရွာခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် မေလ ၅ ရက်နေ့က မွန်ခွဲထွက်ရေး နိုင်ချမ်းဒိန်းအဖွဲ့မှ ကျောက်ကဒင်းရွာခံနှင့် ရာဖူးရွာခံ စုစုပေါင်း ၂၂ ဦးကို ငွေကြေးတောင်းခံရန် ခေါ်သွားသည်။ တစ်ဦးလျှင် သိန်း ၂၀ တောင်းခံထားသည်။
ထိုကဲ့သို့ နိုင်ချမ်းဒိန်းအဖွဲ့မှ တောင်းထားသည့်ငွေပမာဏကို လျော့ပေးရန် ဒေသခံတို့မှ တောင်းဆိုထားသည်။ သို့သော် ယခုလွတ်မြောက်လာသူတို့မှ ငွေကြေးမပေးဆောင်ရကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
နိုင်ချမ်းဒိန်းအဖွဲ့သည် ရေဖြူမြို့နယ်ရှိ ကျောက်ကဒင်းရွာနှင့် ရာဖူးရွာတို့သာမက အနီးအနားရှိတဝိုက်ရှိ ကျေးရွာတွေမှာလည်း မကြာခဏ ငွေကြေးတောင်းခံမှုများရှိနေသည်။
နိုင်ချမ်းဒိန်းဦးဆောင်အဖွဲ့သည် တနင်္သာရီတိုင်း၊ ရေဖြူမြို့နယ်အနီးရှိ ရေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသအတွင်း အဖွဲ့ဝင် အယောက် ၂၀ နှင့် ၃၀ အကြားဖြင့် လှုပ်ရှားနေသည်။
ခေါ်ဇာမြို့ဥက္ကဌမှ ပြည်သူ့စစ်အတွက် ငွေတောင်းခံ
မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ရေးမြို့နယ်၊ ခေါ်ဇာမြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်ဥက္ကဌတို့မှ ပြည်သူ့စစ်အတွက် ငွေကြေးတောင်းခံရန် မေလ ၁၄ ရက်နေ့က ဒေသခံများကို အစည်းအဝေးခေါ်ယူသည်။
ခေါ်ဇာမြို့ပေါ်တွင် ပြည်သူ့စစ် ၁၀ ယောက်ထားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုသူတို့အတွက် လက်နက်ဝယ်ရန် တစ်အိမ်လျှင် ငွေကျပ် ၅ သောင်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို ၁၀ ယောက်အတွက် လစဉ်စရိတ်ကြေးကိုလည်း တစ်အိမ် ၃ ထောင်စနစ်ဖြင့်
လတိုင်းကောက်ခံသွားမည်ဟု အစည်းအဝေးမှာ ပြောသည်။
“ကျမတို့ ခေါ်ဇာမှာဆို ရပ်ကွက် ၂ ခုရှိတယ်၊ အဲဒီရပ်ကွက် ၂ ခုက ဥက္ကဌကနေ ပြောတာ အစည်းအဝေးမှာပေါ့ သူတို့ပြောတာက ခလရ ၃၁ က ညွှန်ကြားတယ်လို့ပြောတာ၊ အိမ်တိုင်းပေးရမယ်” ဟု အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သူ ခေါ်ဇာမြို့ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
မြို့ခံအများစုမှာ ပြည်သူ့စစ်ဝင်လုပ်ရန် ဆန္ဒမရှိကြခြင်းကြောင်း ရပ်ကွက်လူကြီးတို့မှ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ လာရောက်လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသူတို့ကို ပြည်သူ့စစ်လုပ်ရန် ငှားရန်းမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို
ဒေသခံတို့မှ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ၄င်းက ပြောသည်။
ခေါ်ဇာမြို့သည် စုစုပေါင်း အိမ်ခြေ ၇၀၀ ကျော်ရှိပြီး၊ ရပ်ကွက် ၁ နှင့် ရပ်ကွက် ၂ ဆိုပြီး ခွဲခြားထားသည်။ ရပ်ကွက် ၁ တွင် ဥက္ကဌ နိုင်လှထိန်အုပ်ချုပ်နေပြီး၊ ရပ်ကွက် ၂ မှာ ဥက္ကဌ နိုင်မြင့်အေး ဦးစီးအုပ်ချုပ်နေသည်။
ပြည်သူ့စစ်များ လုံခြုံရေးချထားရန်အတွက် ရပ်ကွက် ၂ ခုရှိ မယကရုံးမှာတွေမှာ မြို့ခံတို့မှ တနေ့ လူ ၆ ယောက်မှ ၁၀ ယောက်ထိ သဲဆောက်၊ တွင်းတူး၊ ခြံစည်းရိုးကာအစရှိသည်တို့ကို လုပ်အားပေးနေရသည်။
ယခုလို ပြည်သူ့စစ်ထားရှိရန်နှင့် မယကရုံးတွေမှာ လုံခြုံရေးထားတာဟာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ဒေသခံတွေအတွက် လုံခြုံမှုရှိဖို့ လုပ်နေတာပါ အဓိကက ပြည်သူတွေအတွက်ပဲဟု အစည်းအဝေးမှာ ရပ်ကွက်ဥက္ကဌတို့က ပြောသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:12 AM0comments
ရေတွင်း ရေကန် ခမ်းခြောက်မှုပြဿနာ ကဒ်ဘေးအသွင်ဆောင်လာ
ခါတိုင်းနှစ်ထက် မုတ်သုံလေအ၀င်နောက်ကျသည့်အပြင် ရာသီဥတုအလွန်ပူပြင်းမှုတို့ကြောင့် မြန်မာပြည်အနှံ့ ရေတွင်းရေကန်မှ ရေခမ်းခြောက်မှုဖြစ်ပွားပြီး ပြည်သူများ ရေပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကာ ထိုကဲ့သို့ကာလအတန်ကြာလာသည့်အတွက် ကဒ်ဘေးအသွင်ဆောင်လာပြီး ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းချက်များအရ ယခုနှစ် အယ်နီညိုကာလဟာ မေလကုန်ပိုင်းအထိ ဆက်လက်ကြာမြင့်နေမှာဖြစ်သည့်အတွက် ရာသီဥတုပူပြင်းမှု၊ မိုးနည်းမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် လေထုလှုပ်ရှားမှုတွေ စတင်နေပေမယ့် ယခုလ နောက်ဆုံးအပတ်လောက်မှ မုတ်သုံလေ ၀င်ရောက်မှာဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေ၀သ သတင်းဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကိုအခြေခံသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပုံမှန်စိုက်ပျိုးထွန်ယက်သည့် ရာသီကာလ ရောက်လာပေမယ့် အပူလွန်ကဲနေမှုနှင့် လယ်ကွင်းပြင်ရှိ ရေကန်များ ရေခမ်းခြောက်မှုတို့ကြောင့် စတင်နေကြ လုပ်ငန်းများ မစတင်နိုင်သေးကြောင်း သိရသည်။
“အားလုံးက မိုးကိုမျှော်နေကြတယ်၊ အကုန်လုံးက သောက်ရေ သုံးရေအတွက် အခက်အခဲတွေ့နေရတယ်။ ကျနော်တို့မှာ နောက်တပတ်လောက်သာ မိုးမရွာရင် ရေကန်မှာ ရေလုံးဝ ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ အိမ်ပြန်နေရတော့မယ် အခုလယ်တောမှာက လူအတွက်ကော၊ နွားအတွက်ကော ရေက အဓိကပြဿနာဖြစ်လာနေတယ်။ လယ်မှာဆို ရေမရှိလို့ ငါးတွေ သေနေတာတွေလည်းရှိတယ်” ဟု မုဒုံမြို့နယ် ကမာဝက်ကျေးရွာမှ လယ်သမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
သောက်သုံးရေပြတ်လပ်မှုဟာ ရောဂါကူးစက်မှုတွေကိုလည်း တိုးပွားစေသည့်အတွက် သေဆုံးမှုတွေလည်း ရှိလာနိုင်သည်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာလည်း အပူရှပ်သေဆုံးမှု၊ ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောကြောင့် သေဆုံးမှုများရှိနေသည်။
“တောင်ပေါ်ကျောင်းတွေမှာ သီတင်းသုံးနေထိုင်နေတဲ့ သံဃာတော်တွေ သောက်ရေ သုံးရေ ရှားပါးတဲ့အခါ လူတွေလိုမျိုး လိုက်လံသယ်ရဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ဒကာတွေ လာရောက်လှူဒါန်းတာတွေကိုပဲ အားထားနေရပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ဒကာတွေကိုယ်တိုင်က ရေပေးဝေလှူဒါန်းတဲ့ ကားတွေကိုပဲ စောင့်မျှော်လာရတဲ့အထိ ဖြစ်လာနေပြီ” ဟု ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ကမာမိုးကျေးရွာမှ ရွာခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရေလှောင်တမံ၊ ဆည်အနီး နေထိုင်သူတို့ကလွဲပြီး လူအများ ရေပြတ်လပ်မှုပြဿနာ အရေးပေါ်ဖြေရှင်းရမည့် အနေအထားမှာရှိနေသည့်အတွက် စေတနာရှင်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သည့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာ ရပ်ကွက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့မှ သောက်သုံးရေ ရရှိရေးအတွက် အားကြိုး မာန်တက် လုပ်ဆောင်နေကြသည်။
လက်ရှိအချိန် ရေပြတ်လပ်မှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အထက်မြန်မာပြည်၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနှင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြုံတွေ့နေရပြီး၊ လာရောက်လှူဒါန်းသည့် ရေကိုသာ အားကိုးနေရသည်။
မုတ်သုံလေအ၀င်နောက်ကျမှု၊ အပူချိန်လွန်ကဲမှုတွေဟာ သဘာဝအလျောက်သာဖြစ်ပြီး၊ ထိုအကျိုးဆက်ကြောင့် ရေပြတ်လတ်မှု ရေရှည်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းက ကဒ်ဘေးအသွင်ရောက်လုပြီ ဖြစ်သည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:11 AM0comments
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီနှင့် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲကြုံ
မေလ ၁၇၊ ၂၀၁၀
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီနှင့် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီတို့က ရွေးကောက်ပွဲအတွက် သုံးစွဲမည့် ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့နေကြကြောင်း ပါတီခေါင်းဆောင်များက ပြောသည်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ ပေးသွင်းရမည့်စရိတ်အပါအဝင် ရုံးစရိတ်၊ စည်းရုံးရေးစရိတ် စသည့် ရွေးကောက်ပွဲ အထွေထွေစရိတ်များအတွက် သိန်းပေါင်းများစွာ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ကြောင်း ပါတီခေါင်းဆောင်တို့က ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုင်ငံရေး ပါတီမှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ် (၃) သိန်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးစီအတွက် မှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ် (၅) သိန်း ကောက်ခံမည် ဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တဦးအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးစရိတ် ကျပ်သိန်း (၁၀၀) အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်ပေးထားသည်။
“ငွေလည်း မရှိဘူး၊ ရုံးလည်း မရှိသေးဘူး၊ ရုံးနေရာအတွက် ရှာနေတုန်းပဲ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစရိတ်အတွက် အဖွဲ့ဝင်တွေထဲကနေ စုဆောင်းနေတုန်းပဲ၊ ငွေရှိတဲ့လူတွေက တစ်သိန်းထည့်၊ ငွေမရှိတဲ့ လူတွေက ငါးသောင်းထည့်၊ ဒီလိုပဲ လိုက်စုနေရတယ်၊ စီးပွားရေးသမားတွေထဲက ဘယ်သူမှ မထောက်ပံ့သေးဘူး” ဟု မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီခေါင်းဆောင် နိုင်ငွေသိန်းက ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုလုံးအတွက် အထွေထွေအသုံးစရိတ်မှာ သိန်း (၁၂၀၀) ခန့် ကုန်ကျလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ထိုပါတီက ခန့်မှန်းထားသည်။
ကရင်ပြည်သူ့ပါတီက လတ်တလောတွင် ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် ယာယီရုံး ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ၄င်းပါတီကလည်း ရွေးကောက်ပွဲအသုံးစရိတ်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့နေရပြီး ပါတီမှတ်ပုံတင်ကျပါက ရုံးချုပ်အတည်တကျ ဖွင့်ကာ စည်းရုံးရေးဆင်းသွားမည်ဟု ပါတီ၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် စောဆေးဝါးညွန့်က ပြောသည်။
“ငွေရေးကြေးရေး အတော်အခက်အခဲ ရှိတယ်၊ အခုက အဖွဲ့ဝင်တွေကြားကပဲ ဘဏ္ဍာရေး စုဆောင်းနေရတယ်၊ လူထုအင်အားကိုပဲ ကျနော်တို့ ယုံကြည်တယ်၊ တကယ်လို့ ကျနော်တို့ လူထုက တစ်ယောက်ကို ၅၀၀ ကျပ်လောက် ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ အခက်အခဲအားလုံး ပြေလည်သွားမှာပါ” ဟု သူက ပြောသည်။
ကရင်ပြည်သူ့ပါတီက ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့နှင့် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီက မေလ ၄ ရက်နေ့တွင် ပါတီတည်ထောင်ခွင့် အသီးသီး ရရှိခဲ့သည်။
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီက မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းတို့တွင် ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး ကရင်ပြည်သူ့ပါတီက ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:21 AM3comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:09 AM0comments
ရေခန်းခြင်းကြောင့် ရေလုပ်သားများ စီးပွားရေးအခက်ကြုံတွေ့
Fri 14, May 2010
ထိုင်းနိုင်ငံ စံခလပူရီမြို့နယ် ဝင်္ကရွာတွင် ရာသီဥတုကြောင့် ရွာလုံးကျွတ်သုံးစွဲနေသည့် ကန်အတွင်းရှိရေများ ယမန်နှစ်ထက် ခန်းခြောက်သွားသောကြောင့် ၄င်းကို အမှီပြုနေကြသည့် ဖောင်အိမ်များ၊ ရေလုပ်သားများ စီးပွားရေး အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
“ရေခန်းတာက ရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်တာပါ၊ ကျနော်တို့လို ရေမှာ လုပ်စားနေသူတွေအတွက်တော့ အခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့၊ ရေခန်းသွားလို့ ရေအောက်က အဆူးအငုတ်တွေပေါ်လာတော့ ဖောင်အိမ်ငှားတဲ့လူလည်း မရှိတော့ဘူးပေါ့၊ အဲဒါကြောင့် အငှားဖောင်အိမ်တွေ ရေပေါ်စားသောက်ဆိုင်တွေ တွက်ခြေမကိုက်တော့တာပေါ့” ဟု ရေပေါ်အိမ်ဖြင့် ၂၄ နှစ်ကြာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေသူ ဦးချစ်ငွေက ပြောသည်။
ရေအလွန်ခန်းခြောက်သွားသည့်အတွက် ကန်အနီးရှိ ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးနေသူများ စက်ဖြင့် ရေပိုက်သွယ်ယူရန် အခက်အခဲဖြစ်သည့်အပြင် ရေစက်မရှိသူများအတွက် ပိုပြီး ဒုက္ခရောက်ရသည်ဟု စိုက်ခင်းသမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခုလို ကန်ရေခန်းခြောက်ခြင်းမှာ လွန်ခဲ့သည့် ၆ နှစ်တွင် ခန်းခဲ့ဖူးသော်လည်း ယခုလို ဆိုးဆိုးရွားရွား ခန်းခြောက်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ရွာသားများ အံ့သြနေကြသည်။
“အရင်က နွေပိုင်းဆိုရင် ရေခန်းတာတော့ ခန်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်ထိမဟုတ်ဘူး၊ အခု ခန်းတာက ရွာဟောင်းကိုတောင် လှမ်းမြင်နေရတယ်” ဟု ၄င်းရွာမှ မွန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သော ၂၄ နှစ်က ကန်ချနပူရီခရိုင် ထောင်ဖာဖွန်မြို့ရှိ ထော့ခနွန်းဆည် (Srinakarin Dam) တည်ဆောက်သည့်အချိန်မှစ၍ ဆည်အောက်ပိုင်းနေ ဝင်္ကရွာ တစ်ရွာလုံး တောင်ထိပ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ရသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ခါတိုင်းနှစ် နွေပိုင်းရောက်သည့်အချိန်တွင် ကန်ရေအတွင်း ရေပမာဏ အနက် ၁၅ ပေခန့် ကျန်လေ့ရှိသော်လည်း၊ ယခုနှစ်မှာ အနက် ၈ ပေခန့်သာ ကျန်ရှိနေသည်ဟု ဦးချစ်ငွေက ပြောသည်။
ဝင်္ကရွာသည် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူမြို့နှင့် နီးစပ်ပြီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အရှည်ဆုံး သစ်သားတံတားရှိသည့် ရွာဟုလည်း ထင်ရှားသည်။ မွန်လူမျိုးအများစု နေထိုင်ကြပြီး၊ ကရင်နှင့် ထိုင်းလူမျိုးများလည်း နေထိုင်ကြသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:24 AM0comments
အလုပ်လုပ်ခွင့်သက်တမ်း မတိုးပေးသည့်အတွက် UNHCR သို့ လျှောက်ထားသူများ
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ အလုပ်သမားဦးရေ ထက်ဝက်လျှော့ချမည့်အစီအစဉ်ကြောင့် လုပ်သက် (၅) နှစ်ပြည့်ပြီး အလုပ်သမားများ သက်တမ်းမတိုးပေးခြင်းကြောင့် UNHCR သို့ လျှောက်ရန် စိတ်ဝင်စားလာကြသည်။
“မလေးရှားမှာ UNHCR ကဒ်ရရှိထားတဲ့ ဒုက္ခသည် အယောက် ၉၈ဝဝဝ ကျော်ရှိတယ်၊ ကဒ်ရရှိဖို့ အသိမှတ်ပြုခံထားရတာက တသိန်းလောက် ရှိတယ်၊ အခုလို လုပ်သက် ၅နှစ် ပြည့်လို့ ထပ်မတိုးပေးတော့၊ UNHCR လျှောက်ဖို့ကို သူတို့တွေ စိတ်ဝင်စားလာတယ်” UNHCR ရုံးနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသူ ကိုမင်းမင်းက ပြောသည်။
သို့သော် ယခုကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်ခွင့် သက်တမ်းထပ်မရပဲ မိမိနိုင်ငံသို့ မပြန်လိုသူများကို UNHCR အနေနှင့် အသိအမှတ်ပြုပေးရန် မရှိသေးကြောင်း၊ တကယ့်ဒုက္ခသည်ဖြစ်သူများကိုသာ UNHCR အသိအမှတ်ပြုသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ သက်တမ်းထပ်မတိုးပေးခြင်းကို နှစ်ဦးပိုင်းက တရားဝင်ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ယခုရက်ပိုင်းမှစကာ အကောင်အထည်ဖော်လာလေသည်။
“မလေးရှားမှာ အလုပ်သမားတွေ (၃) နှစ်စာချုပ်နဲ့ ပထမအလုပ်လုပ်ခွင့် ရတယ်၊ အလုပ်ရှင်က ကြိုက်ရင် နောက်ထပ် (၂) နှစ်ဆက်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်၊ ၅ နှစ်သက်တမ်းကုန်သွားလို့ရှိရင် ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ်ပြန်ရတယ်” ဟု အန်အယ်လ်ဒီ (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) မလေးရှားမှ ဦးကျော်ကျော်က ပြောသည်။
အလုပ်သက်တမ်း ထပ်မတိုးပေးသည့်အတွက် နေရပ်ရင်းသို့မပြန်လိုသူတွေများမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ် လုပ်နေသူများ အများဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ဒုက္ခသည်အဖြစ် လျှောက်ထားရန် ကြိုးစားလာကြသည်။ လက်ရှိဒုက္ခသည်အဖြစ် UNHCR အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူတွေကိုသာ နေရပ်ရင်းသို့ ပြန်ပို့မည့် အစီအစဉ်မှာ မပါဝင်သေးဘူးလို့ ဦးကျော်ကျော်က ဆက်ပြောသည်။
မလေးရှားအစိုးရမှ သက်တမ်းတိုးခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်းရန် ယခင်က စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း ဖေဖေါ်ဝါရီလ နောက်ပိုင်းမှ အကောင်အထည်ဖေါ်လာပြီး၊ မေလအတွင်းမှာ စိစစ်မှုများ၊ ဖမ်းဆီးမှုများ သိသာစွာများလာသည်။ အိုဗာစတေးဖြင့် နေထိုင်သူများ ပိုအဖမ်းခံရပြီး ဒုက္ခသည်အဖြစ် လိုလားလာကြသော်လည်း ယူအန်ရုံးမှ ဒုက္ခအစစ်ကိုသာ လက်ခံသည်ဟု ကိုမင်းမင်းက ပြောသည်။။
မလေးရှာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဦးရေ များပြားလာခြင်းကြောင့် မလေး ရှားဒေသခံများ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများကြောင့် နိုင်ငံအတွင်း မှူးခင်းများတိုးပွားလာခြင်းနှင့် နိုင်ငံအတွင်း စီးပွားရေးကျဆင်းလာမှုကြောင့် ယခုလို အလုပ်သမားများ လျှော့ချခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ကိုမင်းမင်းက ပြောသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမား (၂.၂) သန်းရှိပြီး၊ မလေးရှားအစိုးရမှ (၁.၅) သန်းထိလျှော့ချရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:02 AM 1 comments
စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ နေရပ်သို့ ပြန်နေကြပြီ
Wed 12, May 2010
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ခလောက်ခနီဒုက္ခသည်စခန်းနှင့် ဖလဲ့ဒွန်းဖိုက်ကျေးရွာသို့ ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာကြသည့် မွန်ဒုက္ခသည်များ နေရပ်သို့ တရွေ့ရွေ့ ပြန်နေကြပြီဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရ၏ ပြည်သူ့စစ်ပုံစံပြောင်းလဲရန် လက်မခံကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ အကြောင်းပြန်ပြီး၊ ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် စစ်အစိုးရအကြား ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားနိုင်သည့်အခြေအနေမှ လက်ရှိငြိမ်သက်နေသည့်အတွက် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ နေရပ်သို့ ယခုလို ပြန်သွားကြသည်။
လက်ရှိ စစ်ရိပ်စစ်ငွေ့များ အေးချမ်းနေခြင်နှင့် နေရပ်ရှိ အိမ်ခြံတွေကို စိုးရိမ်နေသည့်အတွက် ဒုက္ခသည် ၆၀၀ ကျော်ရှိသည့်အနက် ၂၀၀ ကျော် တစ်ရွေ့ရွေ့ ပြန်သွားကြသည်ဟု ခလောက်ခနီဒုက္ခသည်စခန်းရှိ မွန်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ ကော်မတီဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“တစ်ရက်ဆို အိမ်ထောင်စု ၂ စု၊ ၃ စု လောက်က ပြန်နေကြတယ်၊ အခုဆို ခလောက်ခနီစခန်းမှာ အမျိုးသမီးနဲ့ ခလေး စုစုပေါင်း ၂၁၄ ဦး၊ ဖလဲ့ဒွန်းဖိုက်ရွာမှာတော့ အယောက် ၂၀၀ နီးပါးတော့ ကျန်နေသေးတယ်၊ ပြန်တဲ့သူတွေကတော့ သူတို့ ရွာမှာကျန်ခဲ့တဲ့ အိမ်ခြံတွေကို စိတ်ပူလို့ပြန်သွားတာ” ဟု ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
ယခုကျန်ရှိနေသည့် ဒုက္ခသည်များမှာ နေရပ်သို့ ပြန်သွားပြီးမှ စစ်သံကြားရမည်ကို စိုးရိမ်နေသောကြောင့် ခလောက်ခနီဒုက္ခသည်စခန်းမှာသာ အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရန် တောင်တင်နေကြသည်။
“ပြန်သွားပြီးမှ သေနတ်သံတွေ ကြားနေရမှာဆိုးလို့ ဒီမှာခဏ စောင့်ဆိုင်းနေတာပါ၊ အကုန်းလုံးအေးချမ်းသွားမှ ပြန်မယ်” ဟု ခလောက်ခနီ စာသင်ကျောင်းတွင် ခေတ္တနားခိုနေသည့် အဖွားအို တစ်ဦးက ပြောသည်။
၄င်းဒုက္ခသည်များ စားသောက်ရန်အတွက် ဆန်ကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေသည့် TBBC အဖွဲ့တို့ကလည်း ထောက်ပံ့မှုကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဟု မွန်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ ကော်မတီဝင်က ပြောသည်။
“TBBC က တစ်နေ့ကို ဆန် ၅ အိတ်လှူပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီလ ၆ ရက်နေ့က သူတို့ရဲ့ ထောက်ပံ့မှုကို ရပ်လိုက်ပြီးလို့ ကျမတို့ကို ပြောတယ်၊ ကျမတို့ အနေနဲ့ ပြန်တောင်းခံထားတာ အခု ဒီလ ၈၊ ၉၊ ၁၀ ရက်အတွက်ကို ပြန်ပေးထားတယ်၊ လူလည်းနည်းသွားပြီးဆိုတော့ စားသောက်ဖို့က အဆင်ပြေသွားမှာပါ၊ ဘာကြောင့် သူတို့ထောက်ပံ့မှုတွေ ရပ်လိုက်တာတော့ မသိဘူး” ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ ပြည်သူစစ်အသွင်ပြောင်းရန် လက်မခံကြောင်းကို စစ်အစိုးရအာ အကြောင်းပြန်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ပါတီက စစ်အစိုးရ၏ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်မခံပါက ၁၉၉၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားမည်ဟု ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်က ဧပြ႘လ ၇ ရက်နေ့မှာ ပြောကြားထားသော်လည်း ယခုအချိန်အထိ ထူးခြားမှုမရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် ဒုက္ခသည်များ မိမိနေရပ်သို့ လှည့်ပြန်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 3:28 AM2comments
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာမှ ဖောက်ခွဲသူထံ ပြန်မှန်
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူမြို့ပြင်ဂိတ်မှာ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီအချိန်မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတခုဖြစ်ပွားပြီး ဖောက်ခွဲသူနှစ်ဦးထံ ပြန်မှန်ကာ အာဏာပိုင်တို့မှ ဖမ်းဆီးမိခဲ့သည်။
မြို့ပြင်ရှိ မြန်မာအာဏာပိုင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်ရှေ့တွင် ဗုံးသယ်ဆောင်လာသူနှစ်ဦးဖြစ်သူ အောင်အောင်နှင့် မောင်ဖြူဆိုသူတို့က ဖောက်ခွဲရန်ကြိုးစားရာ၌ သူတို့ကို ပြန်မှန်ပြီး အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရရှိသည်။
အာဏာပိုင်တို့မှ ထိုသူနှစ်ဦးကို ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသခံယူပြီး ခဏအကြာမှာ ဘုရားသုံးဆူအခြေစိုက် ခလရ ၂၈၄ သို့ စစ်ဆေးရန်အတွက် ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
မောင်ဖြူမှာ ဘယ်လက်တဖက်ပျက်သွားပြီး ပေါင်မှာလည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာ အောင်အောင်လည်း ပေါင်တွင် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့သည်။
“သူတို့နှစ်ဦးက ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဂိတ်ရှေ့ရောက်တော့ အဲဒီဗုံးကို လှမ်းပစ်ဖို့ လမ်းဆင်းလျှောက်တော့ လက်ထဲမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတာ ပြီးတော့ ဂိတ်ကတာဝန်ခံတွေက ချက်ချင်း သူတို့ကို ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်” ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
“သူတို့နှစ်ဦးကိုတော့ ချက်ချင်းဆေးရုံ တင်လိုက်ရတယ်၊ ပြီးတော့ သုံးဆူမှာ တပ်ချထားတဲ့ ခြေလျင်တပ်ရင်း တပ်မ (၂၈၄) ကို စစ်ဆေးဖို့အတွက် ခေါ်သွားတယ်”ဟု ထိုအရာရှိက ပြောသည်။
မောင်ဖြူနှင့် အောင်အောင်တို့သည် ဟောင်သရော်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်ကြပြီး၊ အောင်အောင်သည် ထိုကရင်တပ်ဖွဲ့ထဲသို့ မဝင်မီ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့မှာ ရဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသည်။
သို့သော် ထိုဖေါက်ကွဲရေးသမားနှစ်ဦးသည် KPF အဖွဲ့မှ အနားယူလိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားသည့်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး KPF အဖွဲ့အနေနှင့် သူတို့နှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်း KPF နှင့် နီးစပ်သောအသိုင်းအဝိုင်း သိရသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 9:08 AM0comments
ရေးမြို့နယ်အတွင်း ဝမ်းပျက် ဝမ်လျောရောဂေါကြောင့် သေဆုံးမှုရှိ
မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ရေးမြို့နယ်အတွင်းရှိ တချို့ကျေးရွာတွေမှာ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါကြောင့် သေဆုံးမှုများရှိနေသည်။
ရေးမြို့ပေါ်အပါအဝင် ထိုအနီးအနားတဝိုက်ရှိ ဇီးဖြူတောင်၊ အဇင်၊ ချောင်းတောင်ကျေးရွာတွေမှာ ယခုလအတွင်း မသန့်ရှင်းသည့်ရေသုံးစွဲမှုကြောင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါဝေဒနာ ဖြစ်ပွားနေပါသည်။
ရေးမြို့ပေါ်ရှိ ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အရ “အဇင်၊ ချောင်းတောင်ရွာဘက်မှာ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျောဖြစ်လို့ သေဆုံးမှုတွေ ရှိနေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ရေးမြို့ပေါ်မှာတော့ သေဆုံးမှုမရှိသေးပါဘူး၊ ဖြစ်တဲ့လူတွေက တော်တော်များတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ယခုလို ရာသီဥတုပူပြင်းလာမှုကြောင့် သောက်သုံးရေခမ်းခြောက်လာကာ ဒေသခံများ မသန့်ရှင်းသည့်ရေ သုံးစွဲရာမှ ထိုရောဂါဖြစ်ပွားလာကြောင်း ထိုဆရာဝန်က ပြောသည်။
“ရေးမြို့က ဆေးရုံမှာတော့ ဖြစ်တဲ့လူတွေ များတယ် ဒါပေမယ့် တက်တဲ့လူက တက်၊ ဆင်းတဲ့လူတွေက ဆင်းနေတော့ မှန်းရတော်တော်ခတ်မယ်၊ ကျနော်တက်နေတုန်းမှာတော့ နှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်၊ အထူးသဖြင့်တော့ လူကြီးတွေအဖြစ်များတယ်” ဟု ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျောရောဂါ ခံစားရသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျောရောဂါဖြစ်ပွားမှုများပြားနေသည့်အတွက် ဆေးရုံမှ လူနာစောင့်များ၊ လူနားလာရောက်သတင်းမေးမြန်းသူများကို ဆေးရုံမှ ကာကွယ်ဆေး တိုက်ကျွေးပေးနေသည်ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျောရောဂါဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ သက်ဆိုရာ ကျန်းမာရေးဌာနမှ ထိုရောဂါနှင့် ပတ်သက်သည့် ပညာပေးဆောင်ရွက်မှုတစုံတရာပြုလုပ်ပေးခြင်း မရှိသေးပါ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နေရာအနှံ့အပြားမှာလည်း ရှည်လျားလွန်းသည့် နွေရာသီ ပူပြင်းမှုကြောင့် ရေခမ်းခြောက်မှုဖြစ်ပွားပြီး ရေပြတ်လပ်မှုဒုက္ခနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည်။ တချို့ဒေသတွေမှာ ရေကို ဝယ်ယူသုံးစွဲနေကြရသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 3:52 AM0comments
စစ်အာဏာရှင်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် အမျိုးသားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခများကို မဖြေရှင်းနိုင်
အေပြီလ ၁၅ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၀
မြန်မာပြည်စစ်အာဏာရှင်နှင့် တပ်မတော်ဦးဆောင်သော စစ်အစိုးရက အခြေခံဥပဒေဖြင့်သာ ဒီမိုကရေစီ ရနိုင်သည်ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ကို မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် ရက်လနှစ်ပေါင်းများစွာ ရေးသားထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖတ်လျှင် ဒီမိုကရေစီသဘောတရား မဆောင်သော ပုဒ်မ ပုဒ်ထီးဖြင့် ရေးသားအတည်ပြုခဲ့သည်။ တရားမျှတမှုနှင့် အစိုးရတရပ်၏ အဓိက မဏ္ဍိုင်ဖြစ်သော တရားဥပဒေအောက်တွင် လူသားတိုင်း၊ နိုင်ငံသားတိုင်း တန်းတူညီမျှမှုကို စစ်အာဏာရှင် အခြေခံဥပဒေက အထင်အရှား ပယ်မြစ်ထားခဲ့သည်။ တပ်မတော်ဦးဆောင်သော အစိုးရ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များ ဦးဆောင်သော ဝန်ကြီးဌာနနှင့် စစ်တပ်မှ ခန့်အပ်သော အစိုးရဝန်ထမ်း အကြီးအကဲများဖြင့် အတိအကျ ရေးသားပြီး အတင်းအကျပ် အတည်ပြုခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံကို အခြေခံကာ ရွေးကောက်ပွဲသစ် ခေါ်ယူကျင်းပရန် ကြိုးပမ်းလျက် ရှိသည်။ ဤရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံရေးအသိတရား ပြည့်ဝသော ခေါင်းဆောင်တို့က ကန့်ကွက် သပိတ်မှောက်ကြသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို စစ်အာဏာရှင်အလိုကျ သဘောကျသည့်အတိုင်း ရေးသားပြီး ဤအခြေခံဥပဒေဖြင့်သာ ဒီမိုကရေစီကို ရနိုင်သည်ဟု ဝါဒဖြန့် ကြွေးကြော်ခြင်းသည် ဦးဏှောက်ပျက်ပြီး တရားဟောနေသော လူတယောက်ပမာ ပုံသဏ္ဍာန်တူပေတော့သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်တရပ်၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်သည်ကို မည်သူတဦးတယောက်မျှ မငြင်းပယ်ချေ။ သို့သော် ၄င်းဖွဲ့စည်းပုံကို အာဏာရှင်ဆန်သော တိုင်းပြည်အတွက် တရားမျှတရေးကို သဘောမဆောင်သော နိုင်ငံရေးအရ အနှစ်သာရမရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကို ရေးသားပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးရုံမျှဖြင့် အမျိုးသားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခကို မဖြေရှင်းနိုင်ချေ။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြဿနာသည် အမျိုးသားရေးပြဿနာနှင့်အတူ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေပါ ပူးတွဲ ဒွန်တွဲလျှက်ရှိသည်။ ဗမာလူမျိုးအကြား နိုင်ငံရေးအရ အမြင်ကွဲပြားမှုကြောင့် ၁၅၄၈-၁၉၈၀ တိုင်အောင် ဦးနေဝင်း ဦးအောင်သော ဆိုရှယ်လစ်အုပ်စုနှင့် သခင်သန်းထွန်းဦးဆောင်သော ကွန်မြူနစ်အုပ်စုတို့အကြား နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၈၀-၂၀၁၀ ယနေ့တိုင်အောင် စစ်တပ်ဦးဆောင်သော စစ်အစိုးရနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော ဒီမိုကရေစီတိုးတက်ထွန်းကားရေးအုပ်စုတို့အကြား အမြင်ကွဲလွဲမှုကြောင့် နိုင်ငံရေးအရ အောင်မြင်တိုးတက်မှု မရှိခဲ့ချေ။ ၄င်းအပြင် ဗမာ့အမျိုးသားဦးဆောင်သော စစ်အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားများဦးဆောင်သော တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ အကြားတွင်လည်း နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှု သီးသန့်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းမှု သဘောတူညီမှု မရခဲ့ချေ။ မြန်မာပြည်၏ အခြေခံနိုင်ငံရေးအဆောက်အအုံဖြစ်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများသည် နှစ်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း အတွင်းကျေကျေ အခဲကျေကျေ တရားမျှတမှုနှင့် အမျိုးသားလွတ်လပ်မှုကို အခြေခံမပြုခဲ့သောကြောင့် ယနေ့ခေတ်တွင်လည်း အာဏာရှင်ဆန်သော တိုင်းပြည်တရပ် ဖြစ်တည်လျက် ရှိသည်။
အာဏာရှင်ဆန်သော စစ်အစိုးရနှင့်အတူ ယခုအသစ်ရေးသားဖွဲ့စည်းထားသော အခြေခံဥပဒေကို လက်ခံခြင်း သဘောတူညီပြီး နိုင်ငံရေးအရ လက်ခံခြင်းသည် အမျိုးသားရေးပဋိပက္ခနှင့် နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကို မဖြေရှင်းနိုင်သေး။ တဖက်သတ် အာဏာသိမ်းယူထားပြီး နိုင်ငံသားများအပေါ် အကန့်အသတ်များစွာနှင့် ဥပဒေပုဒ်မများဖြင့် နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်မှုကို ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကို မျက်ကန်းပြုသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်သည် အခွင့်အရေးသမားတဦးသာ ဖြစ်သည်။
ခေတ်သစ်နိုင်ငံရေး သဘောတရားအရ အစိုးရသည် တရားမျှတမှုကို အခြေခံပြုပြီး လွတ်လပ်သော ရွေးကောက်ပွဲနှင့်အတူ တိုင်းရေးပြည်ရေးအတွက် နိုင်ငံသားတိုင်း တရားဥပဒေနှင့် လျော်ကန်စွာ လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးမှု ပြောဆိုရေးသားမှု ပြောဆိုရေးသားမှု စုစည်းတောင်းဆိုမှု အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ပြီး တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးအတွက် အကြံညာဏ်ဖလှယ်ပေးမှုနှင့်အတူ နိုင်ငံသားတိုင်း တာဝန်အသိတရားနှင့်အတူ လွတ်လပ်မှုနှင့် တရားမျှတမှုအတွက် တိုင်ပွဲဝင်ခြင်းသည် ခေတ်သစ်အယူအဆ ဖြစ်သည်။ တိုးတက်အောင်မြင်သော တိုင်းပြည် အမေရိကန်နှင့် ဥရောပတိုင်းပြည်များသည် နိုင်ငံသားတိုင်း၏ အခွင့်အရေးကို ဥပဒေအရ အကာအကွယ် ပြုထားခဲ့မှုကြောင့် တိုင်းရေး ပြည်ရေး စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ကုန်သွယ်ရေးတို့တွင် ဦးဆောင်မှု ပေးနိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးစနစ်က တိုးတက်မှုနှင့် ကြီးပွားအောင်မြင်မှု အဆောက်အအုံဖြစ်သော လွတ်လပ်မှုနှင့် တန်းတူညီမျှမှုကို အကန့်အသတ်များနှင့် ပိတ်ပင်တားမြစ်မှုတွေကြောင့် တိုင်းပြည်မွဲတေပြီး အောက်ကျ နောက်ကျ ဖြစ်နေခဲ့သည်။
ပညာရေးမှအစ သိပ္ပံနည်းပညာအဆုံး အခြေခံတိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားအတွက် ကျုပ်တို့ နိုင်ငံသားများက ခေတ်မမှီခြင်း နည်းပညာ ရှာဖွေစမ်းသပ်ခွင့်ကို လွတ်လပ်စွာ မပြုခဲ့ခြင်းကြောင့် ယိုးဒယား၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူစသော ဒေသခံနိုင်ငံများက ယနေ့ခေတ်တွင် ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည်၏ ပေါကြွယ်ဝသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ၊ သားငါးများ၊ သစ်ကျွန်းများနှင့် ငွေရင်း ငွေကြေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ သန်းပေါင်းများစွာနှင့် ဝင်ရောက် စီးပွားရေး အခြေချခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံသားများက စီးပွားရေးအရ နောက်ကျမှုကို အကွက်ကောင်းယူပြီး သူတို့က အခွင့်ကောင်းယူ အမြတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤတွင်လည်း တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံရေးစနစ် ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် ပေါ်ထွက်လာသော ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်သည်ကို စစ်အစိုးရက လက်မခံသေး။
ဖွဲ့စည်းပုံ ချွတ်ယွင်းပါက နိုင်ငံရေးစနစ် ဆက်ပြီးချွတ်ယွင်းပျက်ဆီးနေမည်။ နိုင်ငံရေးစနစ် ပျက်ဆီးနေသမျှ စီးပွားရေးနှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမားရေးစသော အခြေခံလူနေမှုဘဝ ဆက်လက်ပြီး အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရမည်။ ရွေးကောက်ပွဲသည် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် တစိတ်တပိုင်း ဖြစ်သော်လည်း သော့ချက် မဟုတ်ချေ။ တိုင်းပြု ပြည်ပြုလွှတ်တော် (သို့) အမျိုးသားလွှတ်တော်က တကျပ်မှအစ ကုဋေပေါင်းများစွာရှိသော တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကို နှစ်တို နှစ်ရှည် ရေတို ရေရှည်၊ အမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ခရီးသွားလာရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး အစစအရာရာတွင် ဥပဒေနှင့်အတူ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးအတွက် အာဏာခွဲဝေမှုများကို စနစ်တကျ ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် နိုင်ငံရေးစနစ် ယိုးယွင်းပျက်ပြားနေသော တိုင်းပြည်တခုတွင် တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်မှအစ ပြည်နယ်လွှတ်တော်တိုင်အောင် အသေးမွှားမှအစ အကြီးဆုံးဖြစ်သော ကာကွယ်ရေး ဘဏ္ဍာသုံးငွေကိုပါ စနစ်တကျ တရားမျှတစွာ အာဏာခွဲဝေရေးအတွက် အာမခံမှု မရှိချေ။
စစ်တပ်ဦးဆောင်သော အစိုးရတရပ်တွင် “အထက်အမိန့်” အရဆိုပြီး ညွှန်ကြားမှုများစွာနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက တာဝန်ယူ တပည့်ခံ လုပ်ပေးကြရမည်။ အာဏာချိန်ခွင်လျှာ မညီမျှသော ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြုပြင်ခြင်း၊ အသစ်တဖန် ပြန်လည်ရေးသားခြင်း၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ အဖွဲ့ပေါင်းစုံ ပါတီပေါင်းစုံမှ ကိုယ်စားလှယ်များ အသေးစိတ် လေ့လာဆွေးနွေးပြီး ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို အပိုင်းအလိုက် ပြန်လည်စမ်းစစ်ရမည်။ တရားမျှတမှုနှင့် တန်းတူညီမျှကို အတိအကျ အလေးအနက် ဖော်ဆောင်ရေးသားရမည်။ နိုင်ငံသား၏ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အကာအကွယ်ပေးရမည်။ အာဏာရှင်ဆန်သော ဖွဲ့စည်းပုံမှ ရွေးကောက်သော ပါလီမာန် (လွှတ်တော်) ကို ကန့်ကွက်ရမည်။ ဤကား ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၏ ရေသောက်မြစ်ဖြစ်သည်။ အသိညာဏ်နှင့် အသိတရားပြည့်ဝသော ခေါင်းဆောင်များ၏ အတွေးအခေါ်ကို အလေးအမြတ်ထားရမည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:15 AM0comments
ခရစ်နှစ်-၂၀၁၀၊ ကောဇာနှစ်-၁၃၇၂ ခုအတွက် ဗေဒင်ဟောကိန်းနှင့် ဖြစ်လာနိုင်သော နိုင်ငံရေးအခြေအနေ
ခရစ်နှစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၁၀ ခု ဇန္နာဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် နေကြတ်ခဲ့သည်။ ဤနှစ်သည် တရုတ်ဗေဒင်အရ ကျားနှစ် ဖြစ်သည်။ ကောဇာသက္ကရာဇ် -၁၃၇၂ သည် ကဆုန်လတွင် သင်္ကြန်ကျသည်။ သင်္ကြန်အကျနေ့ နှင့် အတက်နေ့တို့သည် ပြဿဒါးရက် ဖြစ်နေပြန်သည်။ ၁၃၇၂ ခုနှစ်၏ သက်ရောက်နှစ်အတွက် မဟာဘုတ်အခြေခံ ကံဇာတာအနေအထား အပါအဝင်တို့အပေါ် အခြေပြုပြီး အမည်မဖေါ်လိုသူ ထင်ရှားသည့် ဗေဒင်ဗညာရှင်တစ်ဦးက အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားခဲ့သည်။
ဇန္နာဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မြန်မာပြည်အပေါ် (၁၀) မိနစ်ကြာ (၂-အံစာခွဲ) နေကြတ်ခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်၏ အလယ်တည့်တည့်ပေါ်မှ နေအရစ်ကြတ်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်းဒေသတလျှောက်တွင် ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဤသို့နေကြတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် မြန်မာပြည်အတွက် ဆိုးကျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။ အုပ်ချုပ်သူတွေအတွက် မကောင်းသလို အုပ်ချုပ်ခံ ပြည်သူတွေအတွက်လည်း မကောင်းပါ။ အုပ်ချုပ်သူနှင့် အုပ်ချုပ်ခံများအကြား ကြီးမားသောပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ တနင်္ဂနွေနေ့ နာမည်ရှိသော အုပ်ချုပ်သူ အကြီးအကဲများအတွက် ကံကြမ္မာ ဆိုးဝါးစေနိုင်သည်။ နေကြတ်သည့်အချိန်ကာလသည် သာမန်ဖြစ်နေကျထက် မြင့်သဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ဆိုးဝါးမှုသည် ပြင်းထန်ကြမ်းတမ်းသော သဘောရှိသည်။ ထို့အပြင် ဆန် ရေ ရိက္ခာရှားပါးမှု အသီးအနှံအမျိုးအစားအချို့ အထွက်နည်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
တရုတ်ဗေဒင်အရ ကျားနှစ်ဖြစ်သည့်အတွက် ကျားတို့၏ သဘောအရ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှု၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှု၊ ဆူပူအုံကြွမှု၊ စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု စသည်တို့ ဖြစ်ပေါ်လာစရာ ရှိသည်။ အားကြီးသူ၊ လက်နက်ကိုင်ထားသူတွေက အားနည်းသူ၊ လက်နက်မဲ့သူတွေအပေါ် အနိုင်ကျင့်မှု ဖိနှိပ်မှုများ ရှိမည်။ အစိုးရအပြောင်းအလဲ ဖြစ်ခြင်း၊ ဘေးဒုက္ခအန္တရာယ် ကျရောက်ခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဤကား မြန်မာပြည်မှာရော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင်ပါ ဖြစ်လာနိုင်သည့် အခြေအနေ ဖြစ်သည်။
ကဆုန်လတွင် သင်္ကြန်ကျခြင်းကြောင့် နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲ၊ ခေါင်းဆောင်အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ပြည်သူများက ခေါင်းဆောင်ပြောင်းလဲဖို့ နိုင်ငံရေးစနစ် ပြောင်းလဲဖို့ တောင်းဆိုသည့် အုံကြွမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ သင်္ကြန်ကျသော ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည်၎င်း၊ အတက်နေ့ သောကြာနေ့သည်၎င်း ပြဿဒါးရက် ဖြစ်နေသဖြင့် သင်္ကြန်ကို နှစ်သစ်ကူးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသော နိုင်ငံများအတွက် ပြဿနာ ရှုပ်ထွေးမှု များပြားစေမည်။ တနှစ်တာပတ်လုံး ရှုပ်ထွေးနေရလိမ့်မည်။ သောကြာနေ့သည် နိုင်ငံအများအပြားတွင် ဘေးဆိုးအန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောနေ့အဖြစ် မှတ်ယူထားကြသဖြင့် သာမန်ထက် ကြီးမားသော ပြဿနာ ပဋ္ဋိပက္ခများနှင့် ရင်ဆိုင်ရဖွယ် ရှိသည်။ အုပ်စိုးသူနှင့် ပြည်သူများအကြား ပဋ္ဋိပက္ခဖြစ်ခြင်း အုပ်စိုးသူများအချင်းချင်းအကြားနှင့် ပြည်သူများအချင်းချင်းအကြားတွင်လည်း ပြဿနာပဋ္ဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်လာစရာ ရှိသည်။
၁၃၇၂ ခုနှစ်၏ သက်ရောက်ဇာတာ မဟာဘုတ်အခြေခံ ဗေဒင်သဘောအရ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ အင်္ဂါနေ့နံများသည် ပုတိ၊ ဘင်္ဂ၊ မရဏကိန်းတွင် ကျရောက်နေပြီး အောက်တန်း၊ အနိမ့်တန်းတွင် ရှိနေကြသည်။ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာနေ့နံများသည် အဓိပတိ၊ ရာဇာ၊ အထွန်းတွင် ရှိနေ၍ အပေါ်တန်း အထက်တန်းတွင် ရှိသည်။ အောက်တန်း၊ အနိမ့်တန်း နေ့နံရှိ ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကံဇာတာသည် အညံ့တွင် ရှိနေသလို ထိုနေ့နံရှိ ကုန်ပစ္စည်းများ ရှားပါးမည်။ ထို့အတူ အပေါ်တန်း အထက်တန်းနေ့နံရှိ ခေါင်းဆောင်များ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကံဇာတာကောင်းသလို ထို့နေ့နံပစ္စည်းများ ပေါများဖွယ် ရှိသည်။
ဗေဒင်ဆရာက အနှစ်သဘော ဤသို့ဟောကြားလိုက်သည့်အပေါ် လက်တွေ့အခြေအနေနှင့် မိမိဆက်စပ်လေ့လာကြည့်သည့်အခါ အောက်ပါအတိုင်း သုံးသပ်မိပါသည်။
၂၀၀၄ ခုတွင် လကြတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ တနင်္လာဂြိုလ်ဖြစ်သော လကြတ်ခဲ့သဖြင့် တနလာင်္နံပိုင်ရှင် နိုင်ငံအကြီးအကဲ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခြင်း ခံလိုက်ရသည်။ အာဏာရှင်တို့၏ သဘာဝ တပည့်မွေး ဆရာရှာ အာဏာကို အုပ်စုဖြင့် တည်ဆောက်ထားကြသဖြင့် ၎င်း၏အုပ်စုဝင်များကိုပါ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ဤတွင်စစ်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှ အကြီးတန်းအရာရှိ (၅၀) ခန့်နှင့် နောက်လိုက်နောက်ပါ တစ်ထောင်ကျော်တို့ကုို၎င်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်နှင့် နီးစပ်သူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝင်းအောင်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးတင်လှိုင်၊ လယ်ယာနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ညွန့်တင်တို့ကို၎င်း ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်၏သား ရဲနုိုင်ဝင်းနှင့် ဗိုလ်မှူးဇော်နိုင်ဦးတို့ကိ်ု၎င်း အမှုအမျိုးမျိုးစွဲပြီး ထိန်းသိမ်း ထောင်ချ နေရာမှဖယ်ရှားခဲ့သည်တို့ကို တွေ့ရသည်။
ယခုနှစ် ၂၀၁၀တွင် နေကြတ်ခဲ့သည်။ နေဂြိုဟ်ဖြစ်သော တနင်္ဂနွေနေ့ နံပိုင်ရှင် မြန်မာ့စစ်ခေါင်းဆောင်များထဲတွင် မည်သူတွေ ရှိကြသနည်း။ ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့မြင်နေရသည်မှာ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေး ရှိသည်။ ၎င်း၏ကံဇာတာသည် ကောဇာသက္ကရာဇ် သက်ရောက်နှစ်အရ အနိမ့်ပိုင်းအကျပိုင်းတွင် ရှိနေသည်။ အာဏာရှင်ကြီးတို့၏ သဘာဝ ၎င်းတို့၏နေရာတွင် ဝင်ရောက်လာမည့်လူ့ကို ၎င်းတို့၏သားသမီး သို့မဟုတ် တပည့်ရင်းများသာ ဖြစ်စေလိုသည်။ ပခုံးချင်းယှဉ်သူကို ပေးလိုသည့်ဆန္ဒ မရှိ။ ဒု-မှူးကြီးမောင်အေးသည် မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် အာဏာချိန်ခွင် ညှိနေသူ ဖြစ်သည်။ သူ၏အုပ်စုတွင် တိုင်းမှူး၊ တပ်မမှူး အများအပြား ရှိသည်။ ဤသို့ ပခုံးချင်းယှဉ်နေသည့် အနေအထားကို မှူးကြီးသန်းရွှေ မလိုလားသည်မှာ ကြာပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယ္ခုနှစ်နေကြတ်ခြင်းသည် ဒု-မှူးကြီးမောင်အေးအတွက် ဖြစ်လာလေမလား တွက်ဆစရာ ဖြစ်နေသည်။
ဒု-မှူးကြီးမောင်အေးသည် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကဲ့သို့ လက်ကိုင်တပ်မရှိသော ဗိုလ်ချုပ်မဟုတ်။ သူသည်ဖယ်ရှားခြင်း ခံရသော် သူ့နောက်က ဖယ်ရှားခံရမည့် ဗိုလ်ချုပ်တွေ များစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့က လွယ်လွယ်နှင့် အဖမ်းခံကြမည်လား။ မခံပါက ပေါက်ခွဲမှု ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ကျားတို့သဘောအရ ရန်မူမည်၊ စစ်ရေးပဋိပက္ခ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ နေကြတ်သည့်အချိန်သည် သာမန်ထက် ကြာသဖြင့် ပြင်းထန်သည့်သဘော ရှိသည်။
အခြားထင်ရှားသည့်တနင်္ဂနွေနံတို့မှာ- အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ၎င်း၏ဥက္ကဌ ဦးအောင်ရွှေတို့ ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့သည်၎င်း ခေါင်းဆောင်သည်၎င်း တနင်္ဂနွေနံ ဖြစ်နေသည်။ လက်တွေ့အရလည်း လာမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စာရင်းမတင်၊ ဝင်ရောက်အရွေးခံမည် မဟုတ်ဟု ကြေညာထားသည်။ ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးသည်၎င်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်၎င်း ကောဇာသက်ရောက်ဇာတာအရ အနိမ့်တန်းတွင် ရှိနေသည်။ ရွေးကောက်ပွဲကိုဆန့်ကျင်နေသည့်အပေါ် စစ်အစိုးရနှင့် ထိပ်တိုက်တိုးဖွယ် ရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် ထောက်ခံမှုအင်အား ပြည်သူများစွာ ရှိသည်။ နိုင်ငံများစွာက ၎င်းတို့ကို အကာကွယ်ပေးရန် စောင့်ကြည့်နေသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် စစ်အစိုးရအကြား ဖြစ်ရှိနေသောပြဿနာသည် ညှိနှိုင်း၍ ရနိုင်သောအနေအထား မရှိ။ ပေါက်ကွဲလာနိုင်သည့် အနေအထားတွင် ရှိသည်။
နောက်ထင်ရှားသည့် တနင်္ဂနွေနံတစ်ခုမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဖြစ်သည်။ “အ” အက္ခရာဖြင့်စသော တနင်္ဂနွေနံသည် အလားအလား မကောင်း၊ ဖြစ်ပျက်မည့် အလားအလာ ရှိသည်။ လက်တွေ့အရလည်း စစ်အစိုးရက နယ်ခြားစောင့်တပ် သို့မဟုတ် ပြည်သူ့စစ်အသွင်ပြောင်းခိုင်းနေသည်။ ၎င်းကို အပစ်အရပ်အဖွဲ့ကြီးများက လက်မခံနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအခြေအနေသည် နိဂုံးချုပ်ဖွယ် ရှိနေသည်။ ၎င်းအပစ်အရပ်အဖွဲ့များကို စစ်အစိုးရဘက်က သွားရောက်တိုက်ခိုက်ပါက ပြင်းထန်းသော လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းစစ်မီး ထတောက်တော့မည်။ ကျားနှစ်၏ သဘောသဘာဝအရ သွေးထွက်သံယိုမှု၊ စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်လာစရာအကြောင်း ရှိသည်။ ပြည်သူများ စစ်ရေးစစ်ဒဏ် ခံရဖွယ်၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ဘဝ ရောက်ရဖွယ် မြင်သည်။
အပစ်အရပ်အဖွဲ့များနှင့် စစ်ဖြစ်လျှင် နယ်စပ်တွင်သာ ဖြစ်မည်မဟုတ်။ အတွင်းပိုင်းမှာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ကောဇာခုနှစ်၏ မဟာဘုတ်ဗေဒင် သက်ရောက်နေ့နံအရ ကချင်၊ မွန်၊ ဝ၊ ရှမ်း တို့သည် အထက်တန်းတွင် ရှိနေကြသဖြင့် ဆုံးရှံးနစ်နာမှုများစွာ မရှိနိုင်၊ န အ ဖ စစ်အစိုးရအဖို့ အန်ိမ့်နံတွင် ကျရောက်နေသဖြင့် ပို၍ထိခိုက်နစ်နာကျဆုံးရဖွယ် ရှိသည်။ အပစ်ရပ်အဖွဲ့ဝင်များအား တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနိုင်ဖွယ် ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ကဆုန်လတွင် သင်္ကြန်ကျခြင်း၏ ဖြစ်တတ်သောသဘောအရ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲ သို့မဟုတ် ခေါင်းဆောင်အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာဖွယ် ရှိသည်။ အနိမ့်ဆုံး ထိုသို့ဖြစ်ရန် တောင်းဆိုအုံကြွမှုများ ရှိလာလိမ့်မည်။ ၁၉၆၂ ခုက ကဆုန်လတွင် သင်္ကြန်ကျခဲ့ရာ စစ်အဏာသိမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ (၁၃၆၉) ခုတွင် သင်္ကြန်အတက်နေ့သည် ကဆုန်လဆန်းတစ်ရက် ဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်္ကြန်၏အဖျားပိုင်းမျှသာ ကဆုန်လအတွင်း ကျရောက်ခဲ့သည်။ ထိုမျှနှင့်ပင် (၈၈) ကျောင်းသားဟောင်းများ၏ ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းမှု ဆန္ဒပြပွဲ၊ သံဃာထုကြီး၏ကျယ်ပြန့်သော ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ယ္ခုနှစ်တွင် အကြိုရက်မှစ၍ သင်္ကြန်ရက်များအားလုံးသည် ကဆုန်လထဲတွင် ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်အုပ်စိုးသူများ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေး စံနစ်ယန္တရားတခုလုံး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာဖွယ် ရှိသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာကို သုံးသပ်ကြည့်ပါက သင်္ကြန်ကို နှစ်သစ်ကူးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသောနိုင်ငံ တခုဖြစ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရှပ်နီဝတ် ပြည်သူများနှင့် အဏာရအစိုးရအကြား ပြဿနာပြင်းထန်နေသည်။ လူ (၂၀) ကျော် သေဆုံးခဲ့ရပြီး လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရဖျက်သိမ်းရဖွယ် ရှိနေသည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနှင့် နယ်စပ်တွင် သေနတ်သံများ ကြားနေရသည်။
မြန်မာပြည်တွင်ကား သင်္ကြန်အကြတ်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီးအနီးရှိ ရေကစားမဏ္ဍာပ်တစ်ခု ဗုံး (၃) လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ရာ လူ (၈) ဦးသေ၊ (၁၇၀) ခန့် ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ကြားသိရသည်။ သင်္ကြန်အတက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့၌ လေပြင်းတိုက်သဖြင့် ရေကစားမဏ္ဍာပ် အများအပြား ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ နှစ်သစ်ကူးနေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ် မေခနှင့် မလိခမြစ်နှစ်သွယ်ဆုံရာ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေကာတာ တည်ဆောက်ရာ၌ ဗုံး (၄) လုံး ပေါက်ခဲ့ပြန်သည်။ အသေအပျောက်စာရင်း မသိရသော်လည်း အပျက်အစီးအချို့ ရှိခဲ့သည်။ ၁၃၇၂ ခုကို အမြောက်သံ ဗုံးသံများဖြင့် နိဒါန်းပျိုးနေကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၁၃၇၂ ခု၏ အလားအလာသည် စိုးရိမ်ဖွယ် အလွန်ကောင်းနေပါသည်။ ခရစ်နှစ် ၂၀၁၀ အကူး နှစ်သစ်ကူးနေ့တွင်လည်း မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ နှင့် ရေးမြို့အကြား ကားလမ်းမပေါ်နှင့် ကားလမ်းဘေးတို့တွင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး အမှတ်အသားများစွာကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထိုသို့နိဒါန်းစခဲ့ရာမှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေများ ထွက်လာသောအခါ အများပြည်သူနှင့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းအများအပြားတို့ လက်မခံနိုင်သော အချက်များကို တွေ့ရှိလာရသည်။ ထို့ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲ၏ အလားအလာသည် အပေါင်းလက္ခဏာ၊ နတ်လူသာဓု ခေါ်နိုင်မည့် အလားအလာ မရှိပါ။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ကမ္ဘာ့တခွင်ကို လေ့လာကြည့်ပြန်သောအခါ သင်္ကြန်အကြို ဧပြီ (၁၃) ရက်နေ့၌ အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတို့တွင် လေပြင်းတိုက်သဖြင့် လူ (၁၀၀) ကျော် သေဆုံးခဲ့ရသည်။ သင်္ကြန်အကျနေ့ (၁၄) ရက်နေ့၌ တရုတ်ပြည်အနောက်မြောက်ပိုင်း တိဘက်ဒေသတွင် ငလျှင်လှုပ်ခဲ့ရာ လူ (၂၀၀၀) ကျော် သေဆုံးပြီး (၁၀၀၀၀) ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ကြသည်။ ၄င်းသင်္ကြန်ရက်အတွင်း အိုက်စ်လန်နိုင်ငံတွင် မီးတောင်ပေါက်ကွဲခဲ့ရာ ဥရောပအနောက်ပိုင်းနိုင်ငံများ တလွှားတွင် မီးခိုးနှင့် ပြာများ ဖုံးလွှမ်းသွားသဖြင့် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကို ၄-၅ ရက်မျှ ပိတ်ထားခဲ့ရသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်များသည်လည်း မြန်မာတို့နှစ်သစ် ၁၃၇၂ ခုအတွက် အဆိုးလက္ခဏာ နိဒါန်းအစများ ဖြစ်လေမလား တွေးပူစရာ ဖြစ်နေရပါသည်။
မည်သို့ဆိုစေ ဗေဒင်ဆရာ၏ တွေ့ရှိဟော်ကားချက်များသည် မြန်မာ့လောက ကမ္ဘာ့လောကအပေါ် ကျရောက်လာနိုင်သော အကောင်းအဆိုး ကံကြမ္မာရှိလာနိုင်သည် ဖြစ်သောကြောင့် သုံးသပ်ချင့်ချိန် ပြင်ဆင်ထားနိုင်ရန် တင်ပြလိုက်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုံပြည်သူအပေါင်း ဘယာဘေး ကင်းဝေးနိုင်ပါစေ။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:14 AM0comments
မွန်ပြည်နယ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ဗုံးပေါက်ကွဲ
ယမန်နေ့ည ၉ နာရီခန့်တွင် မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့ အောင်ဇေယျရပ်ကွက် မြို့မရဲစခန်းဝင်းအတွင်း ဗုံးတစ်လုံး ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး ယခုနှစ်အတွင်း မွန်ပြည်နယ်၌ ဒုတိယအကြိမ် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်သည်။
ယခုပေါက်ကွဲမှုတွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ဒဏ်ရာရရှိခြင်း မရှိသည့်ပြင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းလည်း မရှိကြောင်း ပေါက်ကွဲရာ အနီးရှိ မျက်မြင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“တိတ်ဆိတ်တဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ပေါက်တဲ့အသံက တအားကျယ်တာပဲ၊ ညက ဘယ်သူမှ ထွက်မကြည့်ရဲဘူး၊ မိုးလင်းမှ ထွက်ကြည့် ဖြစ်တယ်” ဟု အထက်ပါ မျက်မြင်က ပြောသည်။
ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံးတွင် ပထမအကြိမ် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရုံးဝန်ထမ်း ၃ ဦး အနည်းငယ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ ရက်ခန့်မှစ၍ သံဖြူဇရပ်မြို့တွင် ညစဉ် တင်းကျပ်စွာ စစ်ဆေးနေသည့် ကြားကပင် အဓိက စစ်ဆေးရာအနီး ရဲစခန်းဝင်းအတွင်း ယခုကဲ့သို့ ပေါက်ကွဲခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရဲစခန်းအနီး နေထိုင်သူတို့က ပြောသည်။
“ည ၆ နာရီခွဲလောက်ကနေ စပြီး ညတိုင်း စစ်ဆေးနေတယ်။ ဆိုင်ကယ်သမားကို အဓိကထား စစ်တယ်၊ ထိုင်ခုံဖုံးကို ဖွင့်ခိုင်းတယ်၊ ရဲစခန်းအနီး အဝိုင်းမှာ အစစ်များတယ်” ဟု အောင်ဇေယျရပ်ကွက်သားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယခုပေါက်ကွဲမှု အပါအ၀င် ၁၀ ကြိမ်ထက်မနည်း ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။
ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားတိုင်း မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း စစ်အစိုးရက အတိအကျ ထုတ်ပြန်အရေးယူနိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ပြည်ပရှိ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများကိုသာ စွပ်စွဲပြောဆိုလေ့ ရှိပြီး ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများကလည်း ၎င်းတို့၏ လုပ်ရပ်မဟုတ်ကြောင်း ပြန်လည်ငြင်းချက်ထုတ်ကြသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:53 AM0comments
ရွာအနီး မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ ရောက်လာ၍ ရွာသားများစိုးရိမ်နေကြ
ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများတွင် ဗမာစစ်တပ်တို့ တစ်ခါမှမလာဘဲ ယခုမှလာရောက်နေသည့်အတွက် ရွာသူရွာသားများကြောက်ရွံ့နေကြကြောင်း သိရသည်။
ထီပေါ့ကလိုကျေးရွာနှင့် ဝါကလိုင်ရွာတွင် ညပိုင်းအချိန်၌် မီးစက်နှင့် TV များဖွင့်ခွင့်မပြုရန် ရွာဥက္ကဌက ပိတ်ပင်ထားပြီး ရွာသူရွာသားများမဖွင့်ရဲကြဘဲ၊ နေ့ပိုင်းအချိန်တွင်သာဖွင့်ဖြစ်နေကြသည် ဟု ထီပေါ့ကလိုရွာသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
“ညညဆိုလည်း သွားလာတဲ့လူလည်းသိမ်မရှိကြဘူး နောက်တော့ မြန်မာစစ်အစိုးရတို့လည်း ရွာအပြင်မှာခိုအောင့်နေကြတာလေး အဲဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ရွာတစ်ရွာလုံးကို စစ်ဖြစ်တာကိုကြောက်နေကြတာ" ဟု ထီပေါ့ကလိုရွာသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဒီထီပေါ့ကလိုရွာသည် မွန်ပြည်သစ်ပါတီပိုင်ထားသည့်နယ်မြေဖြစ်ပြီး ထိုရွာ၏အနီးအနား တစ်ဝိုက်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရောက်လာကြပြီး ရွာအတွင်းမဝင်ဘဲ၊ ရွာအပြင်တွင် ခိုအောင့်နေကြသည့်အတွက် ရွာသူရွာသားများ စစ်ဖြစ်မည်စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ နေကြ သည်ဟုပြောသည်။
ရွာအတွင်း ညပိုင်းအချိန်တွင် ၈/၉နာရီနောက်ပိုင်းတွင် သွားလာခွင့်မပြုရဲကြဘဲ တစ်ရွာလုံးကြောက်ရွံ့ နေကြသည်ဟု ထီပေါ့ကလိုရွာသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက ဧပြီလ (၂၂) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ်ပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုထားသည်ကို မွန်ပြည်သစ်ကလက်မခံနိုင်ကြောင်း စစ်အစိုးရကိုအကြောင်းပြန်ထားပြီးနောက် မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာရှိသည့် ကျေးရွာများကို စစ်အစိုးရတို့က ထိုးစစ်ဆင်းလာမည်ကို ကျေးရွာသားများကြောက်ရွံ့နေကြသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
အလားတူပဲ လွန်ခဲ့သော ဧပြီလ (၂၂) ရက်နေမှစ၍ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ သထုံခရိုင်ဘက်ရှိ ရွာသူရွာသားများသည် မွန်စစ်တပ်နှင့် ဗမာစစ်တပ်တို့ ပစ်ခတ်မည်ဆို၍ ထိတ်လန့်ကြောက်နေကြသည်ဟုသိရသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 3:56 AM0comments
မွန်ခွဲထွက်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ယမန်နေ့ညမှာ ရေဖြူမြို့နယ်အတွင်း မွန်ကျေးရွာသားများကို ပြန်ပေးဆွဲငွေတောင်းခံခဲ့သည်။
မွန်ခွဲထွက်နိုင်ချမ်းဒိန်းအဖွဲ့က ကျောက်တလင်းနှင့် ရာဖူးကျေးရွာမှ လူ ၂၂ ဦးကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး၊ ကျပ်သိန်း (၄၀၀) ကျော် တောင်းခံခဲ့သည်ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကျောက်တလင်းကျေးရွာဒေသခံတစ်ဦး၏ ပြောပြချက်အရ ပြန်ပေးဆွဲခံထားရသော ကျေးရွာဒေသခံများမှာ ရာဖူးရွာမှ (၁၅) ဦး၊ ကျောက်တလင်းမှ ယောကျာ်း (၄) ဦး၊ မိန်းကလေး (၃) ဦး ဖြစ်သည်။
“ကျနော်တို့က ဒီလိုမျိုး နိုင်ချမ်းဒိန်းတို့အဖွဲ့ကနေ တစ်အိမ်လျှင် ဘယ်လောက်ပေးရမယ် ဆိုတာမျိုး သတ်မှတ်ပြီး လာတောင်းတာရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ဒေသခံတွေ ပြန်ပေးဆွဲပြီး၊ တစ်ဦးကို သိန်း ၂၀ တောင်းတယ်၊ မပေးနိုင်တဲ့ ရွာသားအတွက်တော့ စိတ်ညစ်နေတယ်” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
မွန်ခွဲထွက်ရေးအဖွဲ့မှ လက်ရှိတောင်းခံထားသော ငွေပမာဏကို ရွာခံများ မပေးနိုင် သောကြောင့် ညှာတာသည့်အနေနှင့် လျှော့ပေါ့ပေးပါရန် ဒေသခံများက တောင်းဆိုထားသည်။
အလာတူပင် နိုင်ချမ်းဒိန်းဦးဆောင်သည့် မွန်ခွဲထွက်ရေးအဖွဲ့က တခြားကျေးရွာတွေမှာလည်း ဆပ်ကြေးငွေတောင်းခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရေဖြူမြို့နယ်ရှိ ဆင်ကူးဒေသခံတစ်ဦးကလည်း “နိုင်ချမ်းဒိန်းတို့အဖွဲ့က ကျမတို့ရွာကို မကြာခဏ ဆပ်ကြေးလာတောင်းတာမျိုးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် အရင်ကတော့ ဒီလောက်မတောင်းဘူး၊ အခု တောင့်တင်းတဲ့အိမ်ဆို တစ်သိန်း ပေးရမယ်၊ လယ်ယာလုပ်တဲ့အိမ်တို့ဆို နှစ်သောင်း ပေးရမယ်” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
ဆင်ကူးကျေးရွာသည် အိမ်ခြေပေါင်း (၄၀၀) ဝန်းကျင်ရှိပြီး၊ ဒေသခံအများစုက လယ်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။ တချို့ကသာ နိုင်ငံခြားထွက်ပြီး ဝင်ငွေရှာကြသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာလည်း ရေမြို့နယ်ဒေသခံ အယောက် ၄၀ ကျော်ကို နိုင်ချမ်းဒိန်းဦးဆောင်အဖွဲ့တို့မှ ခေါ်ယူထိန်သိန်းထားပြီး တယောက်လျှင် ကျပ် ၅ သိန်းတောင်းခံခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ နိုင်ချမ်းဒိန်းမှ တောင်းခံသည့်ငွေများကို ဒေသခံမှ စစ်အစိုးရတပ်မသိစေရန် တိတ်တဆိတ်ပေးဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဒေသခံတို့က ပြောသည်။
နိုင်ချမ်းဒိန်းဦးဆောင်အဖွဲ့သည် တနသာင်္ရီတိုင်း၊ ရေဖြူမြို့နယ်အနီးရှိ ရေမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းဘက်မှာ လှုပ်ရှားနေပြီး၊ မွန်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အဖွဲ့ဝင် အယောက် ၂၀ နှင့် ၃၀ အကြားမှာရှိသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 3:40 AM0comments
ဟံသာဝတီပျက်သုဉ်းခြင်း အခမ်းအနား ပြည်တွင်း၌ မကျင်းပနိုင်
နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော ဟံသာဝတီပျက်သုဉ်းခြင်း အခမ်းအနားကို ယခုနှစ် မကျင်းပနိုင်ကြောင်း ပြည်တွင်းရှိ မွန်ဒေသအသီးသီးမှ အခမ်းအနားဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်များက ပြောသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် စစ်အစိုးရအကြား လက်ရှိတင်းမာနေသော ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကြောင့် အခမ်းအနားကို မကျင်းပနိုင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က ပြောသည်။
“ကျနော်တို့က ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတည်း အခမ်းအနားကို ဆက်ဆက်ကျင်းပလာခဲ့တယ်၊ တစ်နှစ်မှ မပျက်ဘူး၊ ဒီနှစ်တော့ မလုပ်နိုင်ဘူး” ဟု မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်မှ အခမ်းအနားဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီက စစ်အစိုးရ ကမ်းလှမ်းထားသည့် ပြည်သူ့စစ်အသွင်ပြောင်းခြင်းကို ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် တရားဝင် ငြင်းပယ်ပြီးနောက် နှစ်ဖက်လုံးမှ စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများ ရှိကြသည်။
ယခင်နှစ်များတွင် မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များနှင့် ကရင်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းရှိ မြို့နယ်အချို့တို့တွင် အခမ်းအနားကို တိုက်နယ်အလိုက်၊ ကျေးရွာအလိုက် ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
ယခင်နှစ်အခမ်းအနားများတွင် သံဃာတော်များအား ဆွမ်းကွမ်းကပ်လှူခြင်း၊ စေတီများ၌ ဆီမီး ပန်း ရေချမ်းနှင့် တံခွန် ကုက္ကားများကို ကပ်လှူပူဇော်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ကြပြီး ဟံသာဝတီမွန်နိုင်ငံတော် ပျက်သုဉ်းစဉ်က စစ်ဘေးအတွင်း အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြကုန်သော ဘိုးဘွားတို့အား အမျှပေးဝေခြင်းများကို ပြုလုပ်ကြသည်။
ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၁၁၉ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၈ ရက်နေ့ (ခရစ်နှစ် ၁၇၅၇ ) တွင် ဟံသာဝတီမွန်နေပြည်တော် ပျက်သုဉ်းခဲ့သည်။
ယမန်နေ့တွင် ကျရောက်သော ၂၅၃ နှစ်ပြည့် ဟံသာဝတီပျက်သုဉ်းခြင်း အခမ်းအနားကို ပြည်တွင်း၌ မကျင်းပနိုင်ကြသော်လည်း ပြည်ပရောက်မွန်လူမျိုးများက နိုင်ငံအသီးသီးတွင် စည်ကားစွာ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 3:08 AM0comments
မြန်မာပြည်သူနဲ့ အလုပ်သမားများနေ့ အသိတရားများ
အလုပ်သမားတို့ရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး တောင်ဆိုတတ်မှုတွေအတွက် အလုပ်သမားနေ့မှ မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်သမားနေ့ ကျရောက်တဲ့အခါတိုင်း ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကနိုင်ငံတော်တော်များများ အလုပ်သမားထုတွေစုဝေးပြီး ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးအပါအဝင် လုပ်ငန်းခွင်အခွင့်အရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အမျိုးသား အမျိုးသမီး တန်းတူရည်တူအခွင့်အရေးရရှိမှု အပါအဝင် ထိုက်တန်သောလုပ်အားခ ရရှိရေး၊ ခံစားခွင့်နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံမှုအာမခံများစွာအတွက် ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ စုရုံးချီတက်ပွဲတွေ၊ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေ စုရုံးလုပ်ဆောင်တဲ့ နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သည်လို ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင် ကိုယ့်လုပ်အားအခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ အမျိုးမျိုးလှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်သမားတွေအတွက်တော့ အဲဒီလို တောင်းဆိုမှုတွေမပြုနိုင်တဲ့အပြင် ရှိသင့်တဲ့ အခြေခံအခွင့်အရေးကိုတောင်ဆုံးရှုံးနေရကြောင်း နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားများအဖွဲ့မှ ထောက်ပြထားပါတယ်။
လူတိုင်းက အလုပ်သမားဘဝကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြရပြီး လုပ်ကိုင်ကြရတဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်၊ ဌာနတွေသာ ကွဲပြားပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးလာတဲ့အခါ နစ်နာမှုတွေက အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မြင့်မားနိုင်ပါတယ်။ ထိုက်တန်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အတွေ့အကြုံနဲ့ လုပ်အားခမရရှိခြင်း၊ ပေးအပ်သောလစာနဲ့ မထိုက်တန်လောက်အောင် အလုပ်ကို ပိပိရိရိလုပ်စေခြင်းတို့က အလုပ်သမားများကို မကျေမနပ်ဖြစ်စေပြီး သည်လိုကာလအတန်ကြာလာရင် အလုပ်သမားဘက်က နစ်နာလာတတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အလုပ်သမားတွေ မကျေနပ်လာတဲ့အခါ လုပ်ငန်းခွင်ထိရောက်မှု အားနည်းလာပြီး အလုပ်ရှင်ဘက်ကပါ ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားများအဖွဲ့ အိုင်အယ်အို အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားများနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထောက်ပြထားတဲ့ အဓိကပြသနာက အဓမ္မလုပ်အားခ မလုံလောက်မှုပြသနာနဲ့ လုပ်အားခိုင်းစေမှုပြသနာတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်အားခမလုံလောက်ခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေတော့တဲ့အခါ အခြေခံလစာလောက်ဖြင့် အသက်ရှင်ရုန်းကန်နေရသူတွေအနေနဲ့ မသမာမှုတွေ၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေကအစ ဒုစရိုက်မှုတွေအထိ ကျူးလွန်လာနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပဲ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားခိုင်စေမှုသည်လည်း နယ်စွန်နယ်ဖျား အရပ်ဒေသတွေမှာ ခေတ်စားလျှက်ရှိပြီး ဒေသခံပြည်သူတို့ အနေနဲ့ အခွင့်အရေး အဆုံးရှုံးခံနေရပါတယ်။ ပိုမိုဆိုးသွမ်းတာက အတင်းအဓမ္မလုပ်အားခိုင်းစေခံရသူတွေကိုတောင် လုပ်အားပေးလို့မခေါ်ခိုင်းဘဲ ရပ်ရွာသန့်ရှင်းရေးအဖြစ် ခေါ်ဝေါ်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဒေသတော်တော်များများမှာ လုပ်အားပေးနာမည်နဲ့မဟုတ်ရင်တောင် သန့်ရှင်းရေးနာမည် အမည်ခံအဖြင် အဓမ္မခိုင်းစေမှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆက်လက်ရှိနေကြောင်း ထင်းရှားစေပါတယ်။
အလုပ်သမားရပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် ပြည်တွင်းမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်သမားတွေ ရရှိတဲ့ခံစားခွင့်နဲ့ မိမိနိုင်ငံကိုစွန့်ခွာပြီး နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေရရှိတဲ့ ခံစားခွင့်တွေသည်လည်း ဘယ်တော့မှမတူညီနိုင်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံလို စီးပွားရေးကြပ်တည်းမှုကြောင့် နယ်စပ်နိုင်ငံတွေမှာ၊ လက်လှမ်းမီတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ထိုက်သင့်တဲ့လစာရတာနဲ့ ပင်ပန်းတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာတောင် အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတောင် ခံစားခွင့်၊ အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိကျွမ်းမှုမရှိတဲ့ ပြည်ပရောက်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာ မိမိတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံမှာ မိမိတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အခွင့်အရေးမရှိဆိုတာတောင် သိရှိမှုနည်းနေကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူတွေက ထောက်ပြထားပါတယ်။ ထင်ရှားတာက မည်သို့ပင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ၊ အတွေ့အကြုံတွေမှာ ရင့်ကျက်နေပါစေ သူတို့တွေ ရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားတွေနဲ့ တန်းတူလစာရရှိနိုင်ဖို့က မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
အနည်းဆုံး နိုင်ငံတွင် မတူညီတဲ့ဒေသက အလုပ်သမားတွေငှားရမ်းတဲ့အခါ ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးခံစားချက်တောင် သိသိသာသာ ကွဲပြားနေကြောင်း သာဓကများစွာ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ မွန်ပြည်နယ်က လူငယ်တွေ နိုင်ငံတကာမှာ အလုပ်သွားလုပ်တာများလာတော့ ဒေသတွင်းမှာ အလုပ်သမားမလုံလောက်မှုတွေ ဖြစ်လာတယ်။ သည့်အတွက် ဒေသတွင်းအလုပ်သမားဌားရမ်းခတွေလည်းများပြားလာလို့ တစ်ခြားမြန်မာပြည် အထက်ပိုင်းဒေသက အလုပ်သမားတွေကို ထက်ဝက်ဈေးနှုန်းနဲ့ငှားရမ်းပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းတွက်ကြည့်ရင် အဲဒီဒေသဆီကိုလာရောက်လုပ်ကိုင်နေသူနဲ့ အဲဒီဒေသမှ နိုင်ငံတကာမှာ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ နှစ်ဦးနှစ်ရပ်စလုံး တန်းတူရရှိရမယ့် အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ သည်လိုပြသနာမျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်မှာမကပဲ ကမာ့္ဘနိုင်ငံများမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာကြောင့် အလွယ်တကူတော့ မဖြေရှင်းနိုင်သေးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံလို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ အလှမ်းဝေးနေဦးမည်။
မြန်မာပြည်တွင်းကုမ္ပဏီက အသိတရားမဲ့ ကျူးလွန်နေကြ ပြစ်မှုကြီးတခုက နောက်ကျတဲ့အလုပ်သမားတွေကို လစာဖြတ်တောက်တာ၊ ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်စေတာတွေ လုပ်ဆောင်နေလျှက်ရှိပြီး နောက်ကျမှ ပြန်လွှတ်တဲ့အခါမှာတော့ အချိန်ပိုခ ပေးဆောင်လေ့ မရှိသေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ သည်အတွက်လည်း အလုပ်သမားတွေအပေါ် မတးရားခိုင်းစေမှုအနေနဲ့ အရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။
တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ လုပ်သမားထုရဲ့ အတွေးအမြင်တွေလည်းမြင့်မားလာပြီး ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးခံစားခွင့်တွေ၊ မတရားမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါ စုရုံးတောင်းဆိုတတ်တဲ့ခွန်အားတွေ မြန်မာပြည်တွင်းက အလုပ်သမားတွေမှာလည်း ရှိလာနေပါပြီး။ လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်က လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်မှ ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန်က အလုပ်သမားတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုပေါင်းဆန္ဒပြမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီး သူတို့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက် ထုတ်ဖော်ပြောပြတဲ့ သတိတွေ ရှိလာပါတယ်။ သူတို့ပြသနာကို အမြဲတမ်းအလေးအနက် စဉ်းစားပေးနေတဲ့ နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားများအဖွဲ့တွေ ရှိနေတာကို သိရှိလာကြတယ်။ လာမယ့် ကာလတွေမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံက အလုပ်သမားထုကြီးအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အသိရှိရှိဖြင့် မိမိတို့ရထိုက်တဲ့ ခံစားခွင့်၊ အခွင့်အရေးကို တိုးတက်တောင်းဆိုလာကြတော့မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်နေပါတယ်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 4:17 AM0comments